According to tradition, the Shwedagon Pagoda has existed for more than 2,500 years, making it the oldest historical pagoda in Burma and the world.
The Mahar Myat Muni Buddha Image is the most revered Buddha image in Mandalay.
11:52 PM မဇ္စျိမဒေသမှ လေ့လာစရာများ No comments
ကေဆရိယစေတီသည် ကုသိနာရုံ နှင့် ဝေသာလီ သို့ သွားသည့် လမ်းမဘေးတွင်တည်
ရှိသည်။ ဝေသာလီ နှင့် ၅၅ ကီလိုမီတာခန့်အကွာတွင် ရှိသည်။ ဘုရားရှင်လက်ထက်အခါ
က ကေသမုတ္တိနိဂုံး ဟု အမည်ရသည်။ ကေသမုတ္တိသည် ကာလမမည်သော သာကီဝင်
မင်းသားခေါင်းဆောင်များ ကောသလတိုင်း ဘုရင့်အာဏာကို တော်လှန်၍ အများပြည်သူ
ဆန္ဒနှင့်အညီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်သည့် မြို့ဖြစ်သည်။ ကေသမုတ္တိနိဂုံးသည် မောရိယနိုင်ငံ
ထက်စော၍ မြို့ဖြစ်လာသည်ဟုဆိုသည်။ ကာသိတိုင်း၊ မလ္လတိုင်း နှင့် ကောသလတိုင်း
သို့ ရောက်ရှိနေကြသော သာကီဝင်မင်းသားများသည် မသေနဒီကောသလမင်း ပိုင်သော
ကောသမင်း၏ အစွန်အဖျားနေရာတစ်ခုကို သိမ်းပိုက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်နယ်ဖြေအဖြစ် သတ်မှတ်
ကာ မိမိတို့၏ ဘိုးဘေးအစဉ်အလာဖြစ်သော ဘုရင်တစ်ပါးတည်း အုပ်ချုပ်သည့်စနစ်ကို
ပယ်ဖျက်၍ စုပေါင်းအုပ်ချုပ်ခြင်းဖြင့် နေထိုင်သူများ ဖြစ်ကြသည်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ကေသမုတ္တိနိဂုံးသို့ ဒေသစာရီ ကြွတော်မူစဉ် အရေးပါဆုံးသုတ္တန်
များအနက် လူသိများ နာမည်ကျော်ကြားသော ကေသမုတ္တိသုတ္တန်ကို ဤကေသမုတ္တိနိဂုံး၌
ကာလာမင်းများအား ဟောကြားတော်မူခဲ့ရာ မြို့လည်းဖြစ်သည်။ ကေသမုတ္တိ သုတ္တန်မှာ
မြတ်ဗုဒ္ဓ ကေသမုတ္တိနိဂုံးသို့ ရောက်လာသောအခါ ကာလာမ လူမျိုးတို့ စုရုံး ရောက်ရှိလာ
ကြ၏။ မြတ်ဗုဒ္ဓကို သူတို့ အရိုအသေပေး လျှောက်ထားကြသည်မှာ "အို မြတ်စွာဘုရား
မြောက်များစွာသော ဘာသာရေးသမားတို့သည် ကျွနု်ပ်တို့ရွာသို့ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်
အဆက်မပြတ် လာရောက်ကြပါ၏၊ ရောက်လာတိုင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်
ဝါဒကိုသာ အကောင်း ပြော၍ ထွန်းကားအောင် ဟောပြောကြပါ၏။ သူတပါးတို့၏ ဝါဒကို
မူကား ရှုံ့ချအပြစ်ဆို၍ ပျက်ပြားအောင် ပြုကြပါ၏၊ ဘာသာရေးသမားပေါင်းမြောက်များစွာတို့
ကျွနု်ပ်တို့ကေသမုတ္တိရွာသို့ ရောက်တိုင်း မိမိတို့အယူဝါဒကို လက်ခံဖို့ရန် သူတပါးတို့၏အယူဝါဒ
ကို စွန့်ပစ်ဖို့ရန် အသီးအသီး ပြောသွားကြပါ၏ဘုရား။
ထို့ကြောင့် ယခုအခါ ကျွနု်ပ်တို့ ကေသမုတ္တိရွာသား အားလုံး စိတ်ရှုတ်၍နေကြကုန်ပါပြီဘုရား၊
မည်သူ၏ဝါဒ မှားသည်၊ မည်သူ၏ဝါဒ မှန်သည်ဟု မဆုံးဖြတ်နိုင်အောင် သံသယများ ဝင်နေကြ
ကုန်၏ဘုရား။ အို အရှင်ဂေါတမဗုဒ္ဓ- အရှင်သည်ကော မည်သို့ဟောပြနိုင်မည်နည်း"-ဟု မေး
"အို ကာလမတို့- သင်တို့မှာ ယုံမှားသံသယဖြစ်သည် ဆိုလျှင် ဖြစ်ထိုက်ပေ၏။ သင်တို့ရွာ၌
ဆရာများသလောက် ဝါဒလည်းများကုန်၏။ သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကို ဆရာ့ဝါဒတို့နှင့်
သံသယတို့က ဖုံးလွှမ်း၍ နေကြကုန်၏။ ငါသည်မူကား ထိုဆရာတို့ကဲ့သို့ မပြောလို၊ သင်တို့၏
ကိုယ် ပိုင်အတွေးအခေါ်၊ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်၊ ကိုယ်ပိုင်အဆုံးအဖြတ် သည်သာလျှင် သင်တို့၏
ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာ၊ ကိုယ်ပိုင်လမ်းညွှန် ချက်ဖြစ်သင့်သည်ဟု ဆိုချင်သည်။ ထို့ကြောင့်...
(၁)တဆင့်စကား အဆင့်ဆင့်ကြားရသည်တို့အပေါ် မှာလည်း အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်ချက်
(၂) သင်တို့အထက်က ဘိုး,ဘေး,ဘီ ဘင် အစဉ်အ ဆက်လာ ဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုလည်း
အဆုံးသတ် အားကိုးပြီး အဟုတ်မှတ်၍ မကျင့်သုံးကြကုန်နှင့်။
(၃)အခြေအမြစ်မပါသည့် သူပြော ငါပြော ကောလာဟလ စကားတို့ကိုလည်း လက်ခံမမှား
(၄)ဘာသာရေးကျမ်းစာတို့၏ အရှိန်ဩဇာအောက်မှာလည်း နစ်မြုပ်၍မနေကြကုန်နှင့်။
(၅) အကျင့်နှင့် အသိမပါ တက္ကီဝါဒီတို့၏ အတွေး အခေါ်များကိုလည်း ဟုတ်ပြီ မှန်ပြီဟု
(၆)အခြားအခြားသောလူတို့ အခြားအခြားသော အယူဝါဒတို့ထံမှ ပုံတူကူး၍ ကျင့်သုံးခြင်း
သည်လည်း မိမိတို့ ဘဝနှင့် အပ်စပ်လိမ့်မည်ဟု အတည်တကျ မယူကြကုန်နှင့်။
(၇) မိမိတို့အတွေးအခေါ် အယူအဆကို မိမိတို့၏ အတွေးဖြင့်သာလျှင် အကြောင်းယုတ္တိပေး၍
တင်ပြနိုင်ရုံမျှ ဖြင့် ကိုယ့်အတွေး ကိုယ့်ယုတ္တိ ဟုတ်ပြီဟု မယူကြကုန်နှင့်။
(၈) ဆရာတစ်ယောက်ယောက် လာရောက်ဟော ပြောချက်သည် မိမိတွေးထင်ထားသည်နှင့်
ကိုက်ညီ သွားပြီဆို ရုံမျှဖြင့်လည်း ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု မယူဆကြကုန်နှင့်။
(၉) လေးစားထိုက်သော လောကက ဂရုပြုနေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ယောက်၏ ဝါဒသည်
ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟူ၍ လည်း တစ်ထစ်ချ မယူကြကုန်နှင့်။
(၁၀) မိမိတို့ ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်သော ဆရာတို့၏ စကားတိုင်းသည်လည်း ဟုတ်ပြီမှန်ပြီ
အကျိုးရှိပြီဟု အပြီးသတ် မမှတ်ယူကြကုန်နှင့်။
"အိုကာလာမတို့ - အကောင်းအဆိုး ဘယ်ဟာမျိုးမဆို သင်တို့အတွက် သင်တို့ကိုယ်တိုင်
သိအောင်လုပ်ကြ၊ ဤသည်ကား အကောင်းတရား၊ ဤသည်ကား အဆိုးတရား၊ ဤသည်
ကားအမှား၊ ဤသည်ကားအမှန်၊ သင်တို့ကိုယ်တိုင် သိအောင်လုပ်ကြ။ ဤသည်ကား အမှား၊
ဤသည်ကား အဆိုး - ဆိုးကျိုး သာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသည်ကား အကောင်း၊ ဤသည်ကား
အမှန် - ကောင်းကျိုးသာ ဖြစ်လိမ့်မည် ဆိုသည့်အချက်ကို သူတပါးတို့ထံ ဆုံးဖြတ်ခံစရာမလို
သင်တို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့် ကိုယ်ပိုင်သိအောင် လုပ်ကြ။
"ဤသည်ကား အမှား၊ ဤသည်ကား အဆိုးဖြစ် လိမ့်မည်"ဟု သင်တို့ကိုယ်တိုင်သိ၍ ဆုံးဖြတ်
နိုင်လျှင် သင်တို့ ကိုယ်တိုင် ထိုဝါဒကို ပယ်စွန့်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဤသည်ကား အကောင်း၊ ဤသည်ကား အမှန်၊ ဤ အကောင်းအမှန်ကြောင့် သင်တို့မှာ ကောင်းကျိုး
ဖြစ်လိမ့်မည် ဟုဆိုလျှင် မြင်လျှင် သင်တို့ကိုယ်တိုင် ထိုအကျင့်ကို လက်ခံ ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင်တို့ကိုယ်
ပိုင်အသိ၊ ကိုယ်ပိုင်အကျင့်၊ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာလျှင် သင်တို့ဘဝ၏ အရှင်သခင် ဖြစ်သည်။
သင်တို့ဘဝ၏ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးကို သင်တို့၏ အကျင့်နှင့် အသိက အဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် ကိုယ်တိုင် သိအောင်လုပ်ကြ။ ကိုယ့်အသိ နှင့် ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ကြ။
ကိုယ့်အဆုံးအဖြတ်အတိုင်း ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးကြ။ သင်တို့ဘဝ၏ လွတ်မြောက်ရာ တံခါးကို
သင်တို့ ကိုယ်တိုင် ဖွင့်နိုင်ခွင့်ရှိသည်"ဟု ကေသမုတ္တိရွာသား ကာလာမတို့အား ဟောကြား
တော်မူခဲ့ပါသည်။ ဤမြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမများသည် ဘာသာရေးသ မိုင်းတွင် တစ်ခုတည်းသော
အနှိုင်းမဲ့ လွတ်လပ်သော အတွေး အခေါ်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်သည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓက အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသော လမ်းညွှန်ချက်၊ လွတ်လပ်သောအတွေးအခေါ်၊
လွတ်လပ်သော ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်တို့ကို ပေးထားခဲ့သည်မှာ ဘာသာရေးသမိုင်းတွင်
ပြိုင်ဘက်ကင်းသည့် တစ်ခုတည်းသော လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်ခဲ့ပေသည်။
ကေဆရိယသည် နှောင်းခေတ် ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များအရမူ ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ် နောက်ဆုံးခရီးအဖြစ်
ဝေသာလီမြို့မှ ကုသိနာရုံသို့ ထွက်ခွါသွားသောအခါ ဝဇ္ဇီတိုင်းသား လူအများသည် မြတ်စွာ
ဘုရားရှင်အား နောက်ထပ်တစ်ဖန် လုံးဝဖူးမြင်ခွင့်မရတော့မည်ကို သိသဖြင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်
နောက်သို့ လိုက်ပါကြသည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓက ၎င်းတို့နေအိမ်သို့ ပြန်သွားကြရန် အကြိမ်ကြိမ် မိန့်
ကြားသော်လည်း လိုက်မြဲလိုက်ကြသည်။ ကေသမုတ္တိမြို့သို့ ဆိုက်ရောက်သောအခါ ဘုရားရှင်
သည် ပရိသတ်ဘက်လှည့်ကာ နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် လူထုပရိသတ်အား ကိုယ်တော်မြတ်
တစ်ပါးတည်း ခရိးဆက်သွားခွင့်ပြုရန် တိုက်တွန်းတော်မူသည်။ ထို့နောက် ဝဇ္ဇီတိုင်းသား လူ
အများကို သနားကြင်နာတော်မူသဖြင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်က မိမိကိုယ်စား သပိတ်တော်ကို
ပေးစွန့်တော်မူသည်။ ဝဇ္ဇီတိုင်းသားတို့သည် သပိတ်တော်ကို ယူကာ ပြန်လှည့်ကြပြီး ယင်း
သပိတ်တော်ကို ဝဇ္ဇီတိုင်း၏ မြို့တော် ဝေသာလီ၌ စေတီတည်ကာ ဌာပနာသွင်း၍ ထည့်သွင်း
ပူဇော်ကြသည်။ နောင်အခါ ဤဖြစ်ရပ်ကို အထိမ်းအမှတ်ပြုရန်အတွက် ကေသမုတ္တိမြို့၌
ယနေ့အချိန်အခါတွင် ပျက်စီးယိုယွင်းနေသော ကေဆရိယစေတီကြီးကို ဘုရားဖူးများမြင်တွေ့
ဖူးမြော်နိုင်ပါသည်။ သမိုင်းပညာရှင် ကန်နင်ဟန်သည် ဤစေတီကို တိုင်းထွာသောအခါ လုံးပတ်
၁၄၀၀ - ပေရှိပြီး ၅၁ - ပေမြင့်သည်။ စေတီတော်၏ ကိုယ်ထည်မှာ မူလက ပေ ၇၀ - ခန့် မြင့်မည်
ဟုလည်း ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ " ရှေးဟောင်း သုတေသနဆိုင်ရာ တူးဖော်ချက်များအရ ထိုနေရာအနီး၌
၁၀ - ပေ စတုရန်းရှိသည့် ဘုရားကျောင်းငယ်တစ်ခု၏ အုတ်နံရံများ ရစ်ပတ်ခွေလိမ်နေသည့် ဆံပင်
ပုံစံပါရှိသော ပမာဏကြီးမားသည့် ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်၏ ဦးခေါင်းတော်နှင့် ပုခုံးတော်များ တွေ့ရှိရ
သည်" ဟု ရေးသားခဲ့သည်။ ဖာဟီယန်ရော ဟူယင်ဆန်ပါ ကေသမုတ္တိမြို့သို့ သွားရောက်ပြီး ဤ
စေတီတော်ကို ဖူးမြော်ခဲ့သော်လည်း စေတီတော်အကြောင်းကိုမူ ၎င်းတို့၏ ဖော်ပြချက်များတွင်
ဦးသြဘာသ(သာဝတ္ထိ)ဆရာတော်၏ မဇ္စျိမဒေသမှ သမိုင်းရုပ်ကြွင်း ပုံရိပ်လွှာများ၊
တိပိဋကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဝါယမိန္ဒာဘိဝံသ၏ ဗုဒ္ဓဂယာ ဘုရားဖူးများသို့၊
အရှင်ဒေဝိန္ဒာဘိဝံသ ၏ ဗုဒ္ဓဝါဒဆောင်းပါး
S.Dhammika ၏ Middle Land Middle Way
မြတ်ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူရာ မဇ္စျိမဒေသ (အရှင်ကေလာသ) (ဘာသာပြန်)
မဇ္စျိမဒေသမှ လေ့လာစရာ နေရာဒေသများ - ၂၆ (ကုသိနာရုံ)
11:49 PM မဇ္စျိမဒေသမှ လေ့လာစရာများ No comments
မဟာပရိနိဗ္ဗာနစေတီတော်မှ အရှေ့ဘက် ၆ ဖာလုံအကွာ၌ မကုဋဗန္ဓနစေတီတော်
တည်ရှိသည်။ ထိုစေတီနေရာဌာန၌ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ရုပ်ကလာပ်တော်ကို
မီးသဂြိုဟ်ကြသည်။ မလ္လမင်းတို့ မကိုဋ် ထုံးသည့်နေရာ၌ စေတီတည်ထားခြင်း
ဖြစ်၍ မကုဋဗန္ဓ ဟုခေါ်သည်။ ( မကုဋ - မကိုဋ် , သရဖူ၊ ဗန္ဓ - ထုံးဖွဲ့ခြင်း)
မြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံလွန်တော်မူပြီး ခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ မလ္လမင်း
များသည် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဥတုဇရုပ်ကလာပ်တော်ကို ယူဆောင်တော်မူပြီး
မြို့၏ မြောက်တခါးမှ မြို့တွင်းလမ်းမကြီးအတိုင်း ပင့်ဆောင်ခဲ့ကြပြီး မြို့ရှေ့တခါးမှ
ထွက်၍ မြို့၏ အရှေ့ဘက်ရှိ မကုဋဗန္ဓနစေတီတည်ရှိရာဌာနဝယ် အတောင် (၁၂၀)
မြင့်သော နံ့သာထင်းပုံ၌ တင်၍ မီးသဂြိုဟ်ခဲ့ကြသည်။ ဘုရားရှင်၏ ရုပ်ကလာပ်
တော်ကို အသစ်စက်စက် အဝတ်ဖြင့် ရစ်ပတ်ပြီး ဝါဂွမ်းနုဖြင့်ထပ်၍ ရစ်ပတ်ကြသည်။
တစ်ဖန် အသစ်စက်စက်အဝတ်တို့ဖြင့် ထပ်မံရစ်ပတ်ကြသည်။ ထိုနည်းအတိုင်း
ဝတ်စုံ (၅၀၀) ဖြင့် ရစ်ပတ်ပြီး ဆီထည့်ထားသည့် ရွှေတလား(ရွှေခေါင်း)မှာ ထည့်ကာ
ရွှေတလားဖုံးဖြင့် ဖုံးအုပ်လျက် မီးသဂြိုလ်ခဲ့ကြသည်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ပရိနိဗ္ဗာန် စံတော်မမူမီက " ငါဘုရားသည် မကြာမြင့်မီ ပရိနိဗ္ဗာန်
စံရမည်ဖြစ်သည်၊ ငါဘုရား၏ သာသနာသည် အလုံးစုံသော အရပ်မျက်နှာသို့ မပျံ့နှံ့
သေးချေ၊ ငါဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံသော်လည်း ငါဘုရား၏ မုန့်ညင်းစေ့ခန့်မျှသော
ဓာတ်တော်ကို ပင့်ဆောင်ကြကာ မိမိတို့၏ နေရာဌာနတို့၌ စေတီတည်ထား၍
လူများအပေါင်းသည် နတ်ရွာသုဂတိသို့ လားရောက်ကြစေသတည်း" ဟု
ရည်ရွယ်ကာ သရီရဓာတ်တော်များ အဆူဆူကွဲပြားရန် အဓိဌာန်တော် မူခဲ့လေသည်။
ဘုရားရှင် အဓိဌာန်ထားသည့်အတိုင်း ဘုရားရှင်၏ ဥတုဇရုပ်ကလာပ်တော်ကို
မီးသဂြိုဟ်ပြီးသည့်အခါ ဓာတ်တော်နှစ်မျိုးနှစ်စား ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
၁။ အဝိပ္ပကိဏ္ဏဓာတ်တော် ( အသမ္ဘိန္နဓာတ်တော်) - အစိတ်အစိတ် မကွဲပြားသော
၂။ ဝိပ္ပကိဏ္ဏဓာတ်တော် (သမ္ဘိန္နဓာတ်တော်) - အစိတ်အစိတ် ကွဲပြားသော ဓာတ်တော်
အစိတ်အစိတ် မကွဲပြားသော ( အသမ္ဘိန္နဓာတ်တော်) ခုနှစ်ဆူကျန်ရစ်ခဲ့သည်၊
ထိုဓာတ်တော်များမှာ စွယ်တော်လေးဆူ၊ ညှပ်ရိုးတော်နှစ်ဆူ၊ နဖူးသင်းကျစ်တော်
အစိတ်အစိတ် ကွဲပြားသော (သမ္ဘိန္နဓာတ်တော်) များမှာ ၁၆ ပြည် (တစ်တင်းသား)ခန့်
ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ အငယ်ဆုံး ဓာတ်တော်ပမာဏမှာ မုံညင်းစေ့ခန့်ရှိပြီး မြလေးပန်းအဆင်း
နှင့်တူသော ဓာတ်တော် ၆ ပြည်သားခန့်၊ အလတ်စား ဓာတ်တော် ပမာဏမှာ ဆန်ကျိုး
ခန့်ရှိပြီး ပုလဲအဆင်းနှင့်တူသော ဓာတ်တော် ၅ ပြည်သားခန့်နှင့် အကြီးစား ဓာတ်တော်
ပမာဏမှာ ပဲနောက်စေ့ခန့်ရှိပြီး ရွှေအဆင်းရောင်နှင့်တူသော ဓာတ်တော် ၅ ပြည်သားခန့်
ထိုဓာတ်တော် မွေတော်တို့ကို ဒေါဏပုဏ္ဏားကြီးမှ ရှစ်ပြည်ထောင်သော မင်းတို့အား
ရှစ်ပုံရှစ်စုခွဲကာ ပြည်တောင်းဖြင့် ခြင်တွယ်၍ ပြည်ထောင်မင်း တစ်ဦးလျှင် နှစ်ပြည်ကျစီ
ခွဲဝေပေးခဲ့သည်။ ဓာတ်တော်ခွဲဝေနေစဉ် ရှစ်ပြည်ထောင်သော မင်းများ မသိအောင်
လယ်ယာစွယ်တော်ကို ယူပြီး ဦးခေါင်းပေါင်း အတွင်း၌ ဝှက်ထားပြီး လက်ယာအောက်
စွယ်တော်ကို ခြေဖျားစွန်းဖြင့် နင်းဖိ၍ ၀ှက်ထားခဲ့သည်။ ထိုဝှက်ထားသော ဓာတ်တော်
နှစ်ဆူအနက် ဦးခေါင်းပေါင်းအတွင်း ၀ှက်ထားသော စွယ်တော်ကို သိကြားမင်းမှ
ယူဆောင်သွားခဲ့ပြီး ခြေဖျားစွန်းတွင် ဝှက်ထားသော စွယ်တော်ကို နဂါးမင်းမှ ယူဆောင်
ပိပ္ပလိဝနတိုင်းသား မောရိယမင်းများသည်လည်း မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံသည်ကို
ကြားသိရပြီးနောက် လာရောက်ကြသော်လည်း နောက်ကျမှ ရောက်လာသည့်အတွက်
ဓာတ်တော်ဝေစုများ မရလိုက်၍ မြတ်စွာဘုရား မီးသဂြိုဟ်ရာနေရာမှ မီးသွေးကိုသာ
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ သရီရဓာတ်တော်တို့ကို စေတီပုထိုးများ တည်ထားပူဇော်
၁။ မဂဓတိုင်းရှင် အဇာတသတ်မင်းမှ မဂဓတိုင်း၌ ဓာတ်တော်စေတီ တည်၍
၂။ ဝေသာလီပြည်သာ လိစ္ဆဝီမင်းများမှ ဝေသာလီပြည်၌ ဓာတ်တော်စေတီ
၃။ ကပိလဝတ်ပြည်သား သာကီဝင်မင်းများသည်လည်း ကပိလဝတ်ပြည်၌
ဓာတ်တော်စေတီ တည်၍ ပူဇော်ခဲ့ကြသည်။
၄။ အလ္လကပ္ပပြည်သား ကာဗုလိမင်းများသည်လည်း အလ္လကပ္ပပြည်၌
၅။ ရာမရွာသား ကောလိယမင်းများသည်လည်း မိမိတို့၏ ရွာ၌ ဓာတ်တော်စေတီ
၆။ ဝေဠဒီပတိုင်းသား ပုဏ္ဏားသည်လည်း ဝေဠဒီပတိုင်း၌ ဓာတ်တော်စေတီ တည်၍
၇။ ပါဝါပြည်သား မလ္လမင်းများသည်လည်း မိမိတို့၏ ပါဝါပြည်၌ ဓာတ်တော်စေတီ
၈။ ကုသိနာရုံပြည်သား မလ္လမင်းများသည်လည်း မိမိတို့၏ ကုသိနာရုံပြည်၌
၉။ ဒေါဏပုဏ္ဏားသည်လည်း ဓာတ်တော်ခြင့်သော ပြည်တောင်းကို ယူ၍
ပြည်တောင်းစေတီ တည်၍ ပူဇော်ခဲ့သည်။
၁၀။ ပိပ္ပလိဝနတိုင်းသား မောရိယမင်းများသည်လည်း မိမိတို့ရရှိသည့် မီးသဂြိုဟ်
ရာအရပ်မှ ယူဆောင်လာသော မီးသွေးများကို စေတီပုထိုးတည်၍ ပူဇော်ခဲ့ကြသည်။
ဤသို့လျှင် မြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံလွန်တော်မူပြီးနောက် သရီရဓာတ်တော်
စေတီပုထိုး ရှစ်ဆူ နှင့် ပြည်တောင်းစေတီ၊ မီးသွေးစေတီ အားဖြင့် ဆယ်ဆူသော
ထိုဓာတ်တော်များအနက် အသမ္ဘိန္နဓာတ်တော် ခုနှစ်ဆူမှ နဖူးသင်းကျစ်ဓာတ်တော်သည်
သီဟိုဠ်ကျွန်းတွင် ဂေါဋ္ဌာဘယမင်း၏သားတော် ကာကဝဏ္ဏတိဿ မင်းမှ မင်္ဂလာစေတီ
တော်၌ ဌာပနာပြီး စေတီတည်ထားခဲ့သည်။ ယနေ့အခါတွင် အနုရာဓမြို့၏ အရှေ့
မြောက် တြိကောဏမလယဒေသ သေရုဝါဝိလအရပ်မှာ ကိန်းဝတ်စံပယ်လျက်ရှိသည်
ဟုဆိုသည်။ ညှပ်ရိုးတော်ဓာတ် နှစ်ဆူမှ လက်ယာညှပ်ရိုးတော်နှင့် စွယ်တော်လေးဆူ
အနက် လက်ယာအထက် စွယ်တော်မှာ သိကြားမင်းမှ တာဝတိ ံသာနတ်ပြည်၌
စူဠာမဏိစေတီတော် အတွင်း ဌာပနာပြီး တည်းထား ကိုးကွယ် ပူဇော်ထားသည်။
လက်ဝဲညှပ်ရိုးဓာတ်တော်မှာ ဗြဟ္မာ့ပြည်၌ ကိန်းဝပ်စံပယ်လျက်ရှိသည် ဟု မဟာဗုဒ္ဓဝင်၌
ပြဆိုထားသည်။ အောက်လက်ယာစွယ်တော်မြတ်ကို ဇယသေန နဂါးမင်းမှ ယူဆောင်ပြီး
နဂါးပြည်၌ ရတနာခုနှစ်ပါးဖြင့် စီခြယ်ထားသော စေတီတော် အတွင်းမှာ ကိုးကွယ် ပူဇော်
ထားခဲ့သည်။ လက်ဝဲအောက်စွယ်တော် မြတ်မှာ ယခုအခါ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ (သီဟိုဠ်)
ကန္ဒီမြို့မှာ ကိန်းဝပ်စံပယ်လျက်ရှိပြီး လက်ဝဲအထက်စွယ်တော်မှာ တရုတ်ပြည် ပေကျင်းမြို့၌
ယနေ့မြင်တွေ့ရသော မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကို တေဇောဓာတ် လောင်ကျွမ်းရာ
နေရာ၌ တည်ထားသော အင်္ဂ ါရစေတီ (အင်္ဂ ါရ - မီးသွေး) သည်ကား အသောကမင်းကြီး
တည်ထားခဲ့သော စေတီဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်ဟု စာရေးသူ ယူဆမိပါသည်။ ဘုရားရှင်ရဲ့ အထိမ်း
မှတ်နေရာတိုင်းတွင် အသောကမင်းကြီးမှ အသောကကျောက်စာတိုင်များ တည်ထားခဲ့
သော်လည်း ဤကုသိနာရုံ၌ကား ယခုအခါတွင် အသောကကျောက်စာတိုင်ကို မမြင်တွေ့
ရတော့ပေ၊ အသောကကျောက်စာတိုင်ရှိကြောင်းကိုတော့ တရုတ်ရဟန်းတော် ဟူယင်ဆန်
မြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူရာနေရာဖြစ်သော မဟာပရိဗ္ဗာနစေတီတော်နှင့်
မနီးမဝေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ အုတ်တိုက်ငယ် တစ်ခုဖြစ်ပြီး အတွင်း၌ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွါးတော်
တစ်ဆူကို ဖူးမြော်နိုင်ပါသည်။ ဘုရားကျောင်းဆောင်ကို ၁၉၂၇ ခုနှစ်က ဤနေရာ၌
တွေ့ရှိခဲ့သော ဗုဒ္ဓရုပ်ပွါးတော် ကိန်းဝပ်ရန် မြန်မာဘုရားဖူးများက တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ရုပ်ပွါးတော်မှာ အေဒီ ၁၀ - ရာစု သို့မဟုတ် အေဒီ ၁၂ - ရာစု လက်ယာ ဖြစ်သည်ဟု
ဆိုသည်။ ဉာဏ်တော် ၅ ပေ၊ ၆ လက်မရှိ၍ ဘူမိဖဿမုဒြာခေါ် လက်တော်မြေကြီးထိဟန်
ထုလုပ်ထားသည်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူမည့်နေ့၌ ပါဝါပြည်မှ
ကုသိနာရုံသို့ ကြွလာသောအခါ ထိုနေရာအရောက်၌ ပင်ပန်းတော်မူသဖြင့် ရေကြည်
တော်သောက်သုံး၍ ရေသပ္ပါယ်(ရေချိုး) တော်မူရာဌာနဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။
မင်းကွန်းဆရာတော် - မဟာဗုဒ္ဓဝင်
မဇ္စျိမဒေသမှ လေ့လာစရာ နေရာဒေသများ - ၂၅ (ကုသိနာရုံ)
11:41 PM မဇ္စျိမဒေသမှ လေ့လာစရာများ No comments
မြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူရာ(ကုသိနာရာ) သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊
ဥတ္တရပရာဒေ့ရှ်(Uttar-Pradesh) ပြည်နယ်အတွင်း၌ တည်ရှိသည်။
ကုသိနာရုံသည် ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်၌ မလ္လတိုင်း၌ မလ္လမင်းများ
နေထိုင်သည့် မြို့တော်နှစ်ခုတွင် တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားမြို့တော်သည်
ပါဝါမြို့ဖြစ်သည်။ ကုသိနာရာသည် မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူ
သည့်တိုင် မြို့ဟူ၍ အထင်အရှား မဖြစ်ပေါ်သေးဘဲ ပါဝါမြို့ အစွန်အဖျား၌
ရှိသော ရွာငယ်လေးတစ်ခုမျှသာ ဖြစ်သည်။ ကုသိနာရာရွာ၏ ပတ်ဝန်းကျင်၌
အပမ်းဖြေစရာ သရက်တောဥယျာဉ်၊ အင်ကြင်းတောဥယျာဉ်၊မလ္လမင်းများ
ခေါင်းရိတ်မင်္ဂလာနှင့် နာမည်ယူ အဘိသိတ်ခံယူပွဲ ကျင်းပသည့်နေရာ
စသည်ဖြင့် မင်းနှင့် ပြည်သူတို့ လာရောက်၍ သာရေး၊ နာရေး ကိစ္စများ
မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ဘဝတစ်သက်တာ၏ နောက်ဆုံးနှစ်တွင် ပရိနိဗ္ဗာန်
စံတော်မူရန်အတွက် ရာဇဂြိုလ်မြို့မှ ထွက်ခွါပြီး မြောက်ဘက်သို့ ဦးတည်လျက်
နာလန္ဒာ၊ ပတ္တနား၊ ဝေသာလီမြို့တို့ကို ဖြတ်သန်းတော်မူ၍ နောက်ဆုံး
ဒေသစာရီ ကြွချီတော်မူခဲ့သည်။ ကုသိနာရုံသို့ မရောက်ခင် လမ်းခရီးအကြားတွင်
ပါဝါမြို့နေ ရွှေပန်းထိမ်ဆရာ စုန္ဒသည် ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်အား နောက်ဆုံး
ဆွမ်းကို ဆက်ကပ် လှူဒါန်းခဲ့သည်။ စုန္ဒလှူသော ဆွမ်းကိုဘုဉ်းပေးပြီးနောက်
ဘုရားရှင်သည် သွေးဝမ်းသွားခြင်း နှင့် ပြင်းထန်လှသည့် ရောဂါဝေဒနာ
ကပ်ရောက်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဘုရားရှင်က အရှင်အာနန္ဒာအား စုန္ဒ
ရွှေပန်းထိမ်သည်ထံ သွားရောက်၍ နောက်တပူပန်ခြင်း မဖြစ်ရအောင်၊
ဘုရားရှင်တစ်ဆူအား နောက်ဆုံးဆွမ်းကို လှူဒါန်းရခြင်းသည် အမွန်မြတ်
ဆုံးသော အလှူဒါနဖြစ်ကြောင်း ပြောပြရန် မိန့်မြွက်တော် မူခဲ့သည်။
(ဒီ ၂။ ၁၃၆) စုန္ဒလှူဒါန်းသော ဝက်သားဟင်း နှင့် ဆွမ်းကို ဘုဉ်းပေးခြင်း
ကြောင့် ဝမ်းတော်လားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ရှေးဘဝက ပြုခဲ့ဖူးသော အကုသိုလ်
ဝိပါက်တော်ကြောင့် ဝမ်းတော်လားရခြင်းဖြစ်ကြောင်း မိန့်ကြားတော်မူခဲ့သည်။
အရှင်အာနန္ဒာမထေရ်က "မြတ်စွာဘုရားအား ကုသိနာရာရွာငယ်လေးတွင်
အဘယ်ကြောင့် ပရိနိဗ္ဗာန်စံလိုတော်မူပါသနည်း" ဟု မေးလျှောက်သည့်အခါ
ကုသိနာရာရွာငယ်လေးသည် ရှေးအခါက ကုသာဝတီမြို့တော်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ဖူး
ကြောင်းကို မိန့်တော်မူသည်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် အတိတ် (၇) ဘဝတို့တွင်
ကုသလာဝတီမြို့တော်၌ စကြဝတေးမင်း (၇) ကြိမ် ဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး ဤနေရာ၌
(၇) ကြိမ်တိုင် ဦးခေါင်းချခဲ့ရာ နေရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ရာဇဂြိုလ် သာဝတ္ထိစသော
မြို့ကြီးများ၌ ပရိနိဗ္ဗာန်မဝင်စံဘဲ ကုသိနာရုံ၌ ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံခြင်းမှာ
၁။ မဟာသုဒဿနသုတ္တာန်ကို ဟောကြားတော်မူလိုခြင်း၊
၂။ ဗုဒ္ဓဝေနေယျဖြစ်သော သုဘဒ္ဒပရိဗိုဇ်ကို ချေချွတ်တော်မူလိုခြင်း၊
( သုဘဒ္ဒပရိဗိုဇ်သည် ဘုရားရှင်အား အယူဝါဒ အမျိုးမျိုးအနက် မည်သည့်
အယူဝါဒက မှန်ကန်ကြောင်း မည်သည့် အယူဝါဒက မှားယွင်းကြောင်းကို
မေးမြန်းလျှောက်ထားခဲ့သည်။ ဘုရားရှင်က မဂ္ဂင်ရှစ်ဖြာရှိသော သာသနာ၌သာ
သမဏ အစစ်အမှန်ရှိကြောင်း၊ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များရှိကြောင်း၊ မဂ္ဂင်ရှစ်ဖြာ လုံးဝ
မရှိသော သာသနာ၌ သမဏ အစစ်အမှန် မရှိကြောင်း၊ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့
မရှိကြောင်း စသည်တို့ကို ဖြေကြား၍ တရားတော်များ ဟောကြားတော်
မူခဲ့သည်။ သုဘဒ္ဒသည် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ လမ်းညွန်ချက်ရရှိပြီး အပြင်းအထန်
ကမ္မဌာန်းတရားအားထုတ်ရာ အရတ္ထဖိုလ်ဆိုဒ်ရောက်ပြီး မြတ်ဗုဒ္ဓ ပရိနိဗ္ဗာန်
မစံမီ ပစ္ဆိမသာဝက - နောက်ဆုံးတပည့် ရဟန္တာ ဖြစ်သွားခဲ့သည်)
၃။ ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးနောက် ကြွင်းကျန်သော သရီရဓာတ်တော်များကို ခွဲဝေရာတွင်
ခိုက်ရန်များဖြစ်ကြ လိမ့်မည်၊ ဒေါနပုဏ္ဏားဆရာကြီးက ခုနှစ်ပြည်ထောင်မင်းတို့အား
ခိုက်ရန်များကိုငြိမ်းအေးစေ၍ ဓာတ်တော်များ ကို အညီအမျှခွဲဝေပေးလိမ့်မည်။
၎င်းအကြောင်း သုံးရပ်တို့ကို မြင်တော်မူသောကြောင့် ကုသိနာရုံ၌ ပရိနိဗ္ဗာန်
မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံတော်မမူမီ အနီးအနား၌ စုဝေးတော်
မူကြသော ရဟန်းတော်များအား ဘုရားရှင်အနေဖြင့် လမ်းညွန်ဟောကြားမှု
မပြုနိုင်တော့သော်လည်း ဓမ္မကို ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြကြောင်း မိန့်တော်
မူသည် " အာနန္ဒာ - သင်တို့သည် ငါဘုရား၏ သင်ကြားချက် ရပ်စဲသွားခဲ့ပြီ၊
ယခုအခါ ငါတို့ဆရာမရှိတော့ပြီဟု စဉ်းစားမိနိုင်၏၊ ဤသို့မတွေးကြလင့်..
ငါဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနောက် ငါဘုရား ဟောကြားပညတ်ထားပြီး ဖြစ်သည့်
ဓမ္မ နှင့် ဝိနယကို သင်တို့ဆရာပြုကြလော့၊ ( ဒီ ၂။ ၁၂၆) ။"
ထို့နောက် မြတ်စွာဘုရားစွာရှင်သည် နောက်ဆုံးသြဝါဒကို မိန့်တော်မူသည်
"ရဟန်းတို့၊ သင်္ခ ါရတရား မှန်သမျှသည် ပျက်စီးခြင်း သဘောရှိ၏၊
လုံ့လကြိုးကုတ် အားထုတ်ရစ်ကြလော့ " ဟု ငါဘုရား သင်တို့ကို
မိန့်ကြားပေ၏။ ( ဝယဓမ္မာ သင်္ခ ါရာ အပ္ပမာဒေန သမ္ပာဒေထ)
(ဒီ ၂။ ၁၂၇)
တပည့်သာဝကတို့အား နောက်ဆုံးသြဝါဒ မိန့်ကြားတော်မူပြီး မြောက်အရပ်သို့
ဦးခေါင်းပြု၍ ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံတော် မူခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ ထိုအချိန်၌ လာရောက်
ဖူးမြှော်ပူဇော်ကြသူ လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ ပရိသတ်များအတွက် မြောက်အရပ်သို့
ဦးခေါင်းပြု၍ ဖူးမြှော်ပူဇော်ခံခြင်းမှာ သင့်လျော် လျောက်ပတ်သောကြောင့် မြောက်
အရပ်သို့ ဦးခေါင်းပြု၍ ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။(သုတ်မဟာဝါဋီကာ)
မဟာပရိနိဗ္ဗာန ရုပ်ပွါးတော်ကြီးသည် မဟာပရိနိဗ္ဗာနစေတီ၏ အနီးတွင် ရှိသည်။
ရုပ်ပွါးတော်သည် ဦးခေါင်းတော်မှ ဖဝါးတော်အထိ ပေနှစ်ဆယ်ခန့်
(၁၈၈၃) ခုနှစ်တွင် မစ္စတာအေစီကာလိုင်ဆိုသူက တစ်ပိုင်းတစ်စစီ ပြန့်ကြဲ
နေသော ရုပ်ပွါးတော်ကြီးကို ပြန်လည်ဆက်စပ်မွမ်းမံခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ညောင်စောင်းတော်၌ သမားတော်ဇီဝကပုံ၊ အရှင်အာနန္ဒာပုံ၊ သုဘဒ္ဒ ရဟန်းပုံ၊
သိကြားမင်းပုံ၊ မာရ်နတ်ပုံတို့ကိုလည်း ထုလုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရ၏။
အေဒီ (၅) ရာစုတွင် မထုရာမြို့မှ ဗိသုကာဒိနဆိုသူက ထုလုပ်ခဲ့ကြောင်း
ဟရိဗလဆွာမိ ဆိုသူက လှူဒါန်းခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ဤစေတီတော်ကို မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန် စံတော်မူရာ နေရာ၌ တည်ထားခဲ့ခြင်း
ဖြစ်သည်။ မဟာပရိနိဗ္ဗာနစေတီတော်ကို ပထမဦးစွာတည်ထားသူကို မသိရှိရသေး
ဟုဆိုသည်။ ၁၈၇၆ - ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး ကျောက်စာဌာနက တူးဖော်သောအခါ
ကြေးအိုးကြီးတလုံးကို တွေ့ကြရ၍ ၎င်းကြေးအိုးကြီးထဲ၌ သက္ကဋဘာသာဖြင့်
ရေးထားသည့် ကြေးပြားတစ်ချပ်နှင့် ကုမာရဂုတ္တခေတ် (အေဒီ - ၄၁၃၊ ၄၅၅) သုံး
ဒင်္ဂ ါးပြား (၆) ခုစသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။ ရေးသားထားသည့်စာမှာ
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်နှင့် ဟရိဗလဆွာမိက မဟာပရိနိဗ္ဗာနစေတီဌာန၌
လှူဒါန်းသည့် အကြောင်းများပါရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ရုပ်ပွါးတော်ဒါယကာ နှင့်
စေတီတော်ဒါယကာ တို့သည် အတူတူပင် ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ယူဆကြသည်။
တရုတ်ရဟန်းတော် ဟူယင်ဆန် ၏ မှတ်တမ်း၌ ဤစေတီတော်ကို ဖူးခဲ့ရ
စေတီတော်ကြီးကို ကျောက်စာဌာနက ထွင်းဖောက်ရှာဖွေပြီးနောက် ၁၉၁၂ ခု
နှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဟသာင်္တမြို့သား ဦးဖိုးကြားက ပြန်လည်ပြုပြင်
တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဉာဏ်တော်အမြင့် ၁၆၇ ပေရှိသည်၊ ထိုခေတ်က ရူပီးငွေ
၁၈၀၀၀ ကုန်ကျသည်။ (၁၉၂၇) ခုနှစ်တွင် ထီးတော်တင်ခဲ့သည်။ ထီးတော်
အတွက် ရူပီးငွေ ၁၁၁၀၀ ကုန်ကျသည်ဟု ဆိုသည်။ နောင်နှစ်ကာလ ကြာသော
အခါ ငလျင်လှုပ်သဖြင့် စေတီတော်ကြီးသည် ဖောင်းရစ်မှစ၍ ပြိုကျပျက်စီးခဲ့သည်
ဟုဆိုသည်။ အိန္ဒိယကျောက်စာဌာနက ပြန်လည်ပြုပြင် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး
ယခုအခါ စေတီတော်ကို ဘုရားဖူးများ ဖူးတွေ့နိုင်ပါသည်။
သံဝေဇနိယ လေးဌာနတို့တွင် တစ်ခုအပါဝင် ဖြစ်သော ဤ ကုသိနာရုံ ကိုလည်း
ဗုဒ္ဓဂယာ၊ မိဂဒါဝုန်၊ လုမ္ဗိနီ ဌာနတို့ကဲ့သို့ ယနေ့အချိန်တွင် ဘုရားဖူးများ လွယ်ကူစွာ
မဇ္စျိမဒေသမှ လေ့လာစရာ နေရာဒေသများ - ၂၄ (ကပိလဝတ္ထု )
11:37 PM မဇ္စျိမဒေသမှ လေ့လာစရာများ No comments
ကပိလဝတ္ထုသည် မြတ်ဗုဒ္ဓလောင်းလျာ ငယ်စဉ်က နေထိုင်ထီးနန်းစိုက်ရာမြို့ဖြစ်သည်။
သကျ (သာကီဝင်)တို့၏ မြိုတော် ဖြစ်သည်။ သြက္ကာကမင်းကြီး၏ သားတော်၊
သမီးတော်များဖြစ်သည့် ဗုဒ္ဓ၏ ရှေးဘိုး ဘေတို့က တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ကပိလဝတ္ထုမြို့ မဖြစ်ပေါ်မှီကာလက ထိုနေရာ၌ ကပိလရသေ့ သတင်းသုံးခဲ့သော
နေရာဒေသဖြစ်သည်။ ကပိလရသေ့ သီတင်းသုံးသုံးရာ နယ်မြေတစ်ဝိုက်၌
မြက်သစ်ပင် ချုံနွယ်တို့သည် လကျာ်ရစ်လည်ပြီး အရှေ့အရပ်သို့ ရှေးရှူကာ
ပေါက်ရောက်ကြသည်။ ထိုနေရာ၌ ခြင်္သေ့ ကျား စသော သတ္တဝါများသည်
သမင် ဒရယ် စသော သတ္တဝါများကို လိုက်လံဖမ်းဆီးသော်လည်းကောင်း၊
မြွေ ကြောင် စသော သတ္တဝါတို့သည် ဖား ကြွက် စသည်တို့ကို လိုက်လံဖမ်းဆီး
သော်လည်းကောင်း၊ ထိုနေရာသို့ ရောက်ရှိသောအခါ သမင် ဒရယ် စသည်တို့သည်
ခြင်္သေ့၊ ကျား စသော သတ္တဝါတို့ကို ပြန်လည်ခြိမ်းခြောက် ရန်မူကြသဖြင့်
ခြင်္သေ့၊ ကျား စသော သတ္တဝါတို့သည် ရှေ့ဆက်မလိုက်ဝံ့ကြပဲ ပြန်ပြေးကြရသည်
ကပိလရသေ့သည် ဤနေရာကား ရန်အောင်မြင်ရာ မြင့်မြတ်သောမြေ ဖြစ်သည်ဟု
သိရှိသောကြောင့် ထိုနေရာ၌ ကျောင်းသင်္ခမ်းဆောက်ကာ နေထိုင်ခဲ့သည်။
နောင်သောအခါ အလောင်းတော်၏ ဘိုး ဘေးများဖြစ်သော မင်းညီ မင်းသားတို့အား
ဤနေရာကား မြင့်မြတ်သောနေရာဖြစ်သည် ဤနေရာ၌ မြို့သစ် နန်းသစ်
တည်ဆောက်ကြဟု ဆိုကာ ပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ မင်းသားတို့သည်လည်း
ကပိလရသေ့ ညွန်ကြားသည့်အတိုင်း မြို့သစ် နန်းသစ်တည်ဆောက်၍
ကပိလဝတ္ထုမြို့ ကပိလဝတ္ထု တိုင်းပြည်ဟု မှည့်ခေါ်ခဲ့ကြသည်။
( ကပိလ - ကပိလမည်သောရှင်ရသေ့၊ ဝတ္ထု - နေရာ)
ကပိလဝတ္ထုမြို့သည် ဧတဒဂ်ရ အရှင်ကောဏ္ဍည၊ အရှင်အနုရုဒ္ဓါ၊ အရှင်အာနန္ဒာ၊
သုပ္ပဝါသာ (ရှင်သီဝလလိ၏ မိခင်) တို့ မွေးဖွားရာဇာတိမြို့လည်းဖြစ်သည်။
ကပိလဝတ္ထုသည် သကျ(သာကီဝင်) အမျိုးတို့၏ နေရာဒေသဖြစ်ပြီး ကောသလ
နိုင်ငံအတွင်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသ အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရသော ပြည်သူ့နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်၏။
ဤကပိလဝတ္ထုသည် မြတ်ဗုဒ္ဓ ပရိနိဗ္ဗိန်စံတော် မမူမီ အချိန်၌ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်။
အခါတစ်ပါး၌ ပသေနဒီ ကောသလဘုရင်သည် မိမိ၏ သားတော်တစ်ပါးအား
သကျအမျိုးကောင်းသမီး တစ်ယောက်နှင့် လက်ထပ်စေခြင်းဖြင့် သကျမျိုးတို့
အကြား အချိန်အဝါသြဇာကို တိုးချဲ့ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သကျ(သာကီဝင်)မျိုး
တို့သည် မိမိတို့နှင့် အမျိုးဇာတ်မတူသူတို့ကို လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း မရှိကြ၊
အမျိုးဇာတ်မတူသူ ဘုရင်ကောသလ၏အမျိုးနှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားရမည်
ဆိုသောအခါ အထိတ်တလန့်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်လည်း အာဏာတန်ခိုး
ပြင်းထန်သည့် အိမ်နီးချင်းဖြစ်သူ ကောသလမင်း၏ ဆန္ဒကို မလွန်ဆန်နိုင်
သောကြောင့် ကျွန်မဖြစ်သူ ဝါသဘခတ္တယာ၏ သမီးလေးကို သာကီဝင်မျိုးဟု
လိမ်ညာ၍ ပသေနဒီကောသလမင်း၏ သားနှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားစေခဲ့သည်။
ကောသလဘုရင်ကလည်း ကျွန်မလေးကို အမျိုးမြတ်သည့် သာကီဝင်မိန်းကလေး
အဖြစ်လက်ခံပြီး သာဝတ္ထိသို့ယူဆောင်လျက် ကောသလတော်ဝင် မိသားစုနှင့်
လက်ထပ်ထိမ်းမြားစေခဲ့သည်။ နောင်သောအခါ ဝါသဘခတ္တယာမှ ဝိဋဋူဘ
အမည်ရှိ သားတစ်ယောက်ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ဝိဋဋူဘ အရွယ်ရောက်သောအခါ
ကပိလဝတ္ထုရှိ မိဘဆွေမျိုးများထံ အလည်အပတ်သွားချင်လာခဲ့သည်။ မိခင်ဖြစ်သူ
အားခွင့်တောင်းရာ မိခင်ဖြစ်သူက ခွင့်မပေးဘဲ တားမြစ်ခဲ့၏။ အဘယ့်ကြောင့်
ဆိုသော် သကျတို့သည် ဝိဋဋူဘအား လေးလေးစားစား ဆက်ဆံကြမည် မဟုတ်
သည်ကို ကြိုသိထားနှင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆုံးတွင် ဝိဋဋူဘသည် ကပိလဝတ္ထု
သို့ ရောက်အောင်သွားခဲ့၏။ ကျွန်မ၏ သားမှန်းသိသော သာကီဝင်တို့က ဝိဋဋူဘ
အား ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မဆက်ဆံဘဲ အေးစက်စက် အရိုသေပေးမှုကြောင့်
စိတ်ခုပြီး ပြန်လည်ထွက်ခွါခဲ့သည်။ ပြန်လည်ထွက်ခွါလာခဲ့ပြီးနောက် သန်လျက်
မေ့ကျန်ခဲ့သဖြင့် မင်းချင်းယောက်ကျားတစ်ယောက်အား ပြန်လည်ယူခိုင်းခဲ့၏။
မင်းချင်းယောကျာ်း ပြန်လာခဲ့သောအချိန်တွင် ဝိဋဋူဘ ထိုင်ခဲ့သည့်နေရာကို သာကီဝင်
တို့က ကျွန်မသား ထိုင်ခဲ့သည့်နေရာ ကျက်သရေမရှိဟုဆိုကာ ပြောဆိုပြီး နို့ရည်ဖြင့်
ဆေးကြောသန့်စင်နေကြသည်။ ထိုအကြောင်းအရာကို မင်းချင်းယောကျားမှ တွေ့မြင်ပြီး
အကြောင်းစုံကို ဝိဋဋူဘအား ပြန်လည်ပြောကြားလေ၏။ ထို့ကြောင့် ဝိဋဋူဘသည်
အကြီးအကျယ် ဒေါသဖြစ်သွားပြီး " ငါထိုင်တဲ့ နေရာကို ဒင်းတို့က သန့်ရှင်းအောင်လို့
နို့ရည်နဲ့ဆေးကြအုံးပေါ့၊ ငါမင်းဖြစ်တဲ့အခါ ဒီနေရာကို ဒင်းတို့ လည်ချောင်းသွေးနှင့်
ငါပြန်ဆေးမယ်" ဟု ရန်ငြိုးဖွဲ့ခဲ့လေသည်။
ပသေနဒီကောသလအလွန် ဝိဋဋူဘ မင်းဖြစ်သောအခါ သာကီဝင်တို့အား
ရန်ငြိုးအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် စစ်တပ်ဖြစ် ချီတက်ခဲ့သည်။
သုံးကြိမ်လုံး မြတ်စွာဘုရားရှင်က လမ်းမှ ဖြတ်၍ ဝိဋဋူဘ အား ရန်ငြိုးမဖွဲ့ဖို့၊ စစ်ချီခြင်း
မပြုဖို့ ဝင်ရောက်တားမြစ်ကာ တရားဟောတော်မူသောကြောင့် တပ်ပြန်ဆုတ်ခဲ့၏။
ရန်ငြိုမပြေနိုင်ဘဲ ဝိဋဋူဘ ကလည်း ထပ်မံကြိုးစားပြန်သည်။ နောက်ဆုံးအကြိမ်တွင်
သကျတို့၏ ဝဋ်ကျွေးအရ ထိုကဲ့သို့သေရမည်ကို သိသောကြောင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်လည်း
မတားမြစ်တော့ချေ။ ဝိဋဋူဘသည် ကပိလဝတ်ပြည်သို့ စစ်တပ်အလုံးအရင်းဖြင့် ချီတက်၍
သာကီဝင်တို့အား အစုလိုက် အပြုံလိုက် မျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ တချို့လည်း ထွက်ပြေး
လွတ်မြောက်သွားကြပြီး တခြားနေရာ၌ မြို့တည်ဆောက်၍ နေထိုင်ကြသည်ဟုဆိုသည်။
ထိုအချိန်မှစပြီး ကပိလဝတ္ထုတစ်မြို့လုံး ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် တရုတ်ရဟန်းတော် ဖာဟီယန် ရောက်သွားသောအခါ ကပိလဝတ္ထုမြို့
နေရာသည် လုံးဝနီးပါး စွန့်ပစ်ခံနေရာဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူသူကင်းမဲ့သည့် နေရာဒေသ
တစ်ခု ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ၁၉ ရာစု ကုန်ခါနီး အချိန်ထိ ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်၏ဘဝနှင့်
ပတ်သက်သော နေရာတော် များကို ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး တွေ့ရှိသမျှထဲတွင် ကပိလဝတ္ထု
မပါဟု ဆိုကြသည်။ သုဒ္ဓေါဓန နန်းတော်တည်ရှိခဲ့သည့် နေရာတွင် မင်းသား
သိဒ္ဓတ္ထနှင့် မယ်တော်မာယာရုပ်ထုများ ထုလုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟုလည်း
ဆိုသည်။ သမိုင်းများ၏ အဆိုအရ ကပိလဝတ္ထုနေရာသည် အခုချိန်ထိ အငြင်းပွါးစရာ
နေရာတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေခဲ့သည်။ ကပိလဝတ်မြို့နေရာ နှင့် ပတ်သက်၍ တိလောရ
ကောဋ "Tilaurakot"(နီပေါ) နှင့် ပိပရာဟဝါ"Piprahwa"(အိန္ဒိယ)တို့ အငြင်းပွားခဲ့ဘူး
သော်လည်း လုမ္ဗိနီ၏ အနောက်မြောက်ဖက်ရှိ တိလောရကောဋ(နီပေါ)မှာ လုမ္ဗီနီမှ
အရပ်မျက်နှာ အကွာအဝေး အနေအထားအရ ကပိလဝတ်မြို့ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်ဟုလည်း
ဆိုကြပြန်သည်။ တိလောရကောဋ သည် မူလကပိလဝတ္ထုဖြစ်ပြီး၊ ပိပရာဟဝါသည်
မူလမြို့ပျက်စီးသွားပြီးနောက် တည်ထောင်ခဲ့သည့် ကပိလဝတ္ထုမြို့သစ် ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
ယနေ့အချိန်တွင် သုဒ္ဓေါဓနမင်း၏ နန်းတော်ရာဟု ဆိုကြသောနေရာသို့ ဘုရားဖူးများ
သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။ နန်းတော်ရာ ဟုတ် မဟုတ်၊ ကပိလဝတ္ထုနေရာ
စစ်မစစ်ဆိုသည်တော့ ရှုပ်ထွေးလှသော သမိုင်းများအကြားမှာ စာရေးသူ အငြင်းမပွါးလိုပါ။
ဖခင်ဘုရင် သုဒ္ဓေါဓနမင်းက သားတော်သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား တောထွက်သွားမည်ကို
စိုးရိမ်သောကြောင့် ဗိုလ်ချေတစ်ထောင်အားဖြင့်သာ ဖွင့်မှရနိုင်သောတခါးပေါက်နေရာ
ဟုဆိုအပ်သော တူးဖော်ထားသော အုပ်ရိုးနေရာများကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ရဟန်းနှစ်သောင်း ခြံရံ၍ ရာဇဂြိုလ်မြို့မှ တပေါင်းလပြည့်ကျော်
တစ်ရက်နေ့တွင် ယူဇနာ (၆၀) ခရီးကို တနေ့တစ်ယူဇနာနှုံးဖြင့် ကြွချီတော်မူခဲ့ရာ ကဆုန်
လပြည့်ကျော် တစ်ရက်နေ့တွင် ကပိလဝတ်မြို့တော်သို့ ရောက်ရှိတော်မူခဲ့သည်။
သုဒ္ဓေါဓနမင်းကြီးနှင့် သာကီဝင်မင်းများသည် မြတ်စွာဘုရားရှင် သီတင်းသုံးရန်
အတွက် နေရာဌာနကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြရာ နိဂြောဓ သာကီဝင်မင်း၏ ဥယျာဉ်နေရာသည်
မွေ့လျော်ဖွယ်ရှိသည်၊ မြို့နှင့်လည်း မနီး မဝေး၊ သွားလမ်း လာလမ်းနှင့်လည်း
ပြည့်စုံသည်၊ ဆိတ်ငြိမ်သည်၊ ဖူးမြင်လိုသူတို့ လွယ်ကူစွာ ဖူးမြင်နိုင်သည်ဟူသော
အင်္ဂ ါရပ်များနျှင့် ပြည့်စုံသောကြောင့် ဘုရားရှင် သီတင်းသုံးရန် ကျောင်းတော်အဖြစ်
ကပိလဝတ်မြို့တော်ဟောင်း၏ ရှေ့ဘက် (၃) မိုင်လောက်အကွာတွင် နိဂြောဓာရုံ
ကျောင်းတော်ရာ နေရာကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အထိမ်းအမှတ်နေရာအဖြစ် အသောက
မင်းကြီး တည်ဆောက်ထားခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်။ ယခုအခါ အောက်ပိုင်း အုတ်ခုံအကျိုးအပဲ့
နေရာတစ်ခုအဖြစ်သာ တွေ့မြင်နိုင်၏။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်မှာ ထိုကျောင်းတော်ရာ၏
အပေါ်ပိုင်းတွင် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့ ကိုးကွယ်သော သျှီဝလိင်ကြီးကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဆိုင်သော အထိမ်းအမှတ်နေရာတစ်ခုသည် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့၏ ကျောင်း
တော်တစ်ခုအဖြစ် ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။ စာရေးသူ ရှေးပိုင်းစားများတွင်
ရေးခဲ့ဘူးပါသည်။ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့ အလိုအရ လူဖြစ်ခြင်းအစ အဲဒါ နှင့် အဲဒါ ကဟု
ယုံကြည်ပြီး ကိုးကွယ်ကြသည့် လိင် နှစ်ခုသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် သက်ဆိုင်သော နေရာ
တွင်ရောက်ရှိနေပြီး ယခုအချိန်ထိ မဖယ်ရှားနိုင်သည်မှာလည်း စိတ်မသက်သာစရာ
(ဘာသာပြန်) မြတ်ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူရာ မဇ္စျိမဒေသ (အရှင်ကေလာသ)
မဇ္စျိမဒေသမှ လေ့လာစရာ နေရာဒေသများ - ၂၃ (လုမ္ဗိနီ)
11:35 PM မဇ္စျိမဒေသမှ လေ့လာစရာများ No comments
ဗုဒ္ဓ ဖွားမြင်တော်မူရာ ဒေသ
မြတ်စွာဘုရားအလောင်းလျာ ဖွားမြင်တော်မူရာ လုမ္ဗိနီ ဒေသသည် နီပေါနိုင်ငံ
အတွင်း၌ တည်ရှိသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယ်စပ်နှင့် ၆ မိုင်ခန့် ကွာဝေးသည်။
ဗုဒ္ဓဂယာ ဘုရားဖူးများအဖို့ ထိုလုမ္ဗိနီဒေသသို့ သွားရောက်ဖို့ရန်အတွက်
ခရီးစဉ်ပေါ်မူတည်၍ သာဝတ္ထိမှ၎င်း၊ ကုသိနာရုံမှ၎င်း ကားဖြင့် အလွယ်တကူ
သွားရောက်နိုင်သည်။ နိပေါနိုင်ငံ နယ်စပ်ဂိတ်တွင် ဗီဇာထုရပြီး ဗီဇာကြေး
၂၅ ဒေါ်လာကုန်ကျပါသည်။ ထိုလုမ္ဗိနီ ဒေသသည် ခမည်းတော် သုဒ္ဓေါဒန
မင်းကြီး၏ ကပိလဝတ် နေပြည်တော် နှင့် ယသောဓရာ၏ ဖခင်အဥ္စနမင်းကြီး၏
ဒေဝဒဟပြည်အကြားတွင်တည်ရှိသည်။ လုမ္ဗိနီမှ ကပိလဝတ်သို့
၁၃ ကီလိုမီတာခန့် ဝေးကွာပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုကြောင့် အိန္ဒိယ၌ ဗုဒ္ဓဘာသာဌာနများသည်
သာသနာ ၂၅၀၀ ပြည့်(၁၉၅၆) ခုမှစ၍ စည်ကားလာသော်လည်း နီပေါနိုင်ငံ
လုမ္ဗိနီဌာနသည်ကား ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုင်းရှိုင်းသူ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမူးချုပ်
ဦးသန့် (၁၉၆၇) ခုနှစ်တွင် ဤလုမ္ဗိနီသို့ ဘုရားဖူးလာရောက်ပြီး နောက်ပိုင်းမှ
လုမ္ဗိနီ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍
လုမ္ဗိနီ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ငွေအမြောက်မြား စုဆောင်းနိုင်ခဲ့
သော်လည်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ဘဲ ကြန့်ကြာနေခဲ့
သည်၊ ဦးသန့်၏ နှိုးဆော်မှုကြောင့် နောက်ပိုင်းမှ နိပေါနိုင်ငံအစိုးရသည် ကမ္ဘာ့
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီး၏ အကူညီကို ရယူကာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်
စည်ကားလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လုမ္ဗိနီဝန်းကျင်၌ ဦးသန့်ဓမ္မာရုံ ၊ နီပေါ
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ နိုင်ငံတကာ ထေရဝါရ နှင့် မယာယနကျောင်းများကို
လုမ္ဗိနီ အင်းကြင်းတော၌ မြတ်ဗုဒ္ဓ အလောင်းတော်အား ဘီစီ ၆၂၃ ခုနှစ်၊
မဟာသက္ကရာဇ် ၆၈ ခုနစ် ကဆုန်လပြည့် သောကြာနေ့တွင် ဖွားမြင်ခဲ့သည်။
ဘုရားလောင်းလျာသည် ဖွားမြင်ပြီးတော်မူအပြီးတွင် အရပ်လေးမျက်နှာ
ထောင့်အရပ်လေးမျက်နှာ၊ အထက် အောက် အရပ်ဆယ်မျက်နှာတို့ကို
ကြည့်ရှူတော်မူပြီး မိမိနှင့်တူသူ တစုံတစ်ယောက်ကို မမြင်သောကြောင့်
မွေးဖွားရာအရပ်မှ မြောက်အရပ်သို့ ခြေ (၇) လှမ်း လှမ်းကြွတော်မူပြီး
၁။ အဂ္ဂေါဟမသ္မိ လောကဿ - ငါသည် ဗြဟ္မာ နတ် လူ သုံးပါးတို့တွင် အမြတ်ဆုံး၊
၂။ ဇေဌောဟမသ္မိ လောကဿ - ငါသည် ဗြဟ္မာ နတ် လူ သုံးပါးတို့တွင် အကြီးအကဲဆုံး၊
၃။ သေဌောဟမသ္မိ လောကဿ - ငါသည် ဗြဟ္မာ နတ် လူ သုံးပါးတို့တွင် အချီးမွမ်းအပ်ဆုံး
၄။ အယမန္တိမာ ဇာတိ - ယခု ပဋိသန္ဓေ တည်ရခြင်းသည် ငါ့အဖို့ နောက်ဆုံးတည်ရခြင်းဖြစ်သည်။
၅။ နတ္ထိ ဒါနိ ပုနဗ္ဘဝေါ - ယခုအခါ ငါ့အဖို့ နောက်ဘဝသစ် ဖြစ်ရခြင်း မရှိတော့ချေ ဟု
မွေးဖွားပြီးစမှာပင် စကားကြီး ၅ ခွန်းကို ရဲရဲတောက် ကြုံးဝါးတော်မူခဲ့သည်။
ထိုဘုရားလောင်း ဖွားမြင်တော် မူရာနေရာကို ဘီစီ ၂၅ဝ တွင် အသောကမင်းက
ကျောက်တိုင် တစ်တိုင် စိုက်ထူခဲ့၍ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခြုံနွယ်များ ဖုံးအုပ်နေသော
လုမ္ဗီနီကို ခရစ်နှစ် ၁၈၆၆ ခုနှစ်က တွေ့ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
အလားတူပင် ၁၈၉၉ ခုနှစ်တွင် တန်ဆောင်းတစ်ခုကို ထွင်းဖေါက်ရှာဖွေရာမှ
မဟာမာယာဒေဝီသည် အလောင်တော်ကလေးအား ဖွားသန့်စင်၍ အင်ကြင်းခက်ကို
လှမ်းဆွဲဟန်သရုပ်ဖေါ်ထားသည့် ကျောက်ပြားတစ်ချပ်ကို တွေ့သဖြင့် အဆောက်အဦ
အတွင်း၌ ပူဇော်ထားသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဗုဒ္ဓလောင်းလျာ ဖွားမြင်ရာအချက်
ဖွားမြင်ပြီး ခြေ (၇) လှမ်းလှမ်းခဲ့ရာ စေတီ
မယ်တော်မာယာ သားဖွားခန်းရုပ်တုရှိသော အဆောက်အဦ၏ အနောက်ဖက်တွင်
ဗုဒ္ဓလောင်းလျာသည် မြောက်ဘက်သို့ ခြေ ၇ လှမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး ရဲရဲတောက်စကားတို့ကို
ကြွေးကြော်ခဲ့သည့် နေရာအဖြစ် စေတီငယ် (၇) ဆူ တည်ထားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ယခုအခါ အုတ်ခုံငုတ် ၄ ခုကိုသာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတော့သည်။
ဘုရားလောင်းလျာ ဖွားမြင်ပြီးနောက် ခြေ (၇) လှမ်း လှမ်းခဲ့ခြင်းကို အထိမ်းအမှတ်ပြု၍
တည်ထားသော စေတီငယ်များဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓ ဖွားမြင်တော်မူရာ လုမ္ဗိနီဒေသသို့ အသောကမင်းကြီးသည် နန်းစံနှစ် (၂၀)
မြောက်၌ ကြွရောက်ဖူးမြော်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ စေတီပုထိုး နှင့် ကျောင်းကန်များ
ကိုလည်း ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ပြီး အသောက ကျောက်စာတိုင်ကိုလည်း စိုက်ထူ
၎င်းကျောက်စာတိုင်၌ ရှေးဟောင်း ဗြဟ္မီ အက္ခရာဖြင့် စာကြောင်းငါးကြောင်း
ရေးထိုးထားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ပညာရှင်တို့၏ ဘာသာပြန်ဆိုချက်အရ
" ပိယဒဿီဘွဲ့ခံ မင်းမြတ်သည် နန်းစံနှစ် (၂၀)မြောက်၌ ဘုရားလောင်း
ဖွားမြင်တော်မူရာ ဤအရပ်သို့ ကြွရောက်ဖူးမြော် ပူဇော်ခဲ့သည်၊
ဤနေရာ၌ ဘုရားရှင် ဖွားမြင်တော်မူကြောင်းကို ပြသရန် အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်
ကျောက်တိုင် စိုက်ထူတော်မူသည်။ လုမ္ဗိနီရွာကို မြေခွန်တော် ရှစ်ဖို့ တစ်ဖို့သာ
ထမ်းဆောင်စေ၍ အခွန်တော်များ ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုလိုက်သည်" ဟု
သိရသည်။ ယခုအခါ ၁၅ ပေအမြင့်သာရှိတော့သည့် ကျိုးပဲ့ပျက်စီးနေသော
မယ်တော်မာယာ ရုပ်ထုရှိသော အဆောက်အဦ၏ တောင်ဘက်တွင်
မယ်တော်မာယာ နှင့် အလောင်းတော်တို့ ရေသန့်စင်သည့် လေးထောင့်
အုတ်ကန်ငယ်တစ်ခုကိုလည်း တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ရဟန်းတော် ဟူယင်ဆန်
တို့ခေတ်က ရေသည် ကြေးမုံမှန်ကဲ့သို့ ကြည်လင်တောက်ပနေပြီး ရေမျက်နှာ
အပြင်မှာ ပန်းမျိုးစုံတို့ဖြင့် ဖုံးလွမ်းနေသည်ဟု ဆိုသည်။ ဤရေကန်သည်
ဘုရားအလောင်းတော် ဖွားမြင်ပြီးသောအခါ ကောင်းကင်ယံမှ ရေပူ နှင့်
ရေးအေး စီးဆင်းလာပြီး မယ်တော် နှင့် သားတော်ကို ရေသပ္ပါယ်၍ သန့်ရှင်း
စင်ကြယ် နွေးထွေးစေခဲ့သည်။ ထိုရေများ စီးဆင်းလာမှုကြောင့် ရေကန်ငယ်
တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသည်။
ဤနေရာကား ဗုဒ္ဓဖွားမြင်ရာ သံဝေဇနိယဌာန တစ်ခုအဖြစ် သံဝေဂယူကာ
မြတ်ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်များကို အောက်မေ့လျက် ရှိခိုးပူဇော်နိုင်ပေသည်။
မဇ္စျိမဒေသမှ လေ့လာစရာ နေရာဒေသများ - ၂၂ (သာဝတ္ထိ)
11:32 PM မဇ္စျိမဒေသမှ လေ့လာစရာများ No comments
မြတ်စွာဘုရားရှင်က တိတ္ထိတို့နှင့် ကဏ္ဍမ္ဗသရက်ပင်အနီး၌ တန်ခိုးပြိုင်မည်ဟု သတင်းစကားကို
ကြားသိရသောအခါ တိတ္ထိတို့သည် အလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကာ သူတို့၏ တပည့်သာဝက
များအား သာဝတ္ထိပြည်၏ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ယူဇနာအတွင်း သရက်ပင်ရှိသမျှကို အရဝယ်ယူကာ
ခုတ်လှဲကြကုန်၏။ ထို့နောက် တိတ္ထိဆရာကြီး ခြောက်ဦးတို့သည် တန်ခိုးပြိုင်ရန်အတွက် သာဝတ္ထိ
မြို့၌ မဏ္ဍတ်ကြီးများကို ခမ်းနားကြီးကျယ်စွာ ဆောက်လုပ်ထားကြလေသည်။
ပသေနဒီ ကောသလမင်းကြီးသည် မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံသို့ သွားရောက်၍ "တိတ္ထိတို့သည် ပြဋိဟာ
မဏ္ဍပ်ကို ဆောက်စေအပ်ပါပြီ၊ တပည့်တော်သည် အရှင်ဘုရားတို့အတွက် ပြဋိဟာမဏ္ဍပ်ကို
ဆောက်လုပ်ပါရစေ ဘုရား" ဟု လျှောက်ကြားရာ မြတ်စွာဘုရားရှင်က "မြတ်သောမင်းကြီး
သင်မဆောက်လေနှင့် ငါဘုရားအတွက် သိကြားမင်း ဆောက်လုပ်လိမ့်မည်" ဟု မိန့်ကြားလေသည်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ဝါဆိုလပြည့်နေ့၌ ရဟန်းအပေါင်းခြံရံတော်မူကာ သာဝတ္ထိပြည်အတွင်းသို့
ဆွမ်းခံဝင်ရန် ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှ ထွက်တော်မူလာခဲ့သည်။ လမ်းခရီးတွင် ကောသမင်းကြီး
၏ ကဏ္ဍ - မည်သော ဥယျာဉ်မှုး ဆက်ကပ်လှူဒါန်းသော သရက်သီးကို ဘုဉ်းပေးတော်မူပြီးနောက်
သရက်စေ့ကို ဥယျာဉ်မှူးကဏ္ဍ အား စိုက်ပျိုးစေခဲ့သည်။ ထို့နောက် မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်
ထိုစိုက်ပျိုးသော နေရာအထက်၌ လက်တော်ကို ဆေးကြောတော်မူခဲ့သည်။ သရက်ပင်သည်
ချက်ချင်းပင် ကြီးထွားလာကာ တခဏအတွင်း အတောင်ငါးဆယ်ရှိသော ခက်မငါးဖြာနှင့်
ပြည့်စုံသော အပင်ကြီးအဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ထိုခဏအတွင်းမှာပင် အပွင့် အသီးများ
ဖြစ်ထွန်းလာကာ သရက်သီး အမှည့် အခိုင်တို့ဖြင့် တပင်လုံးပြည့်နက်လာခဲ့သည်။
လူတို့သည် သရက်သီးမှည့်တို့ကို ခူးယူစားသုံးပြီးနောက် သရက်စေ့တို့ဖြင့် တိတ္ထိတို့ကို
သိကြားမင်းကလည်း လေနတ်သား၊ နေနတ်သား၊ မိုးနတ်သားတို့ကို စေခိုင်းကာ လေ၊ နေ၊ မိုး
တို့ဖြင့် ပြင်းထန်စွာ တိုက်ခတ်ရွာသွန်းစေလေသည်။ တခဏအတွင်းမှာပင် တိတ္ထိတို့တည်
ဆောက်ထားသော မဏ္ဍပ်တို့သည် လေနောက်သို့ပါ၍ ပျက်စီးသွားလေသည်။ တိတ္ထိအပေါင်း
တို့သည်လည်း ဦးတည်ရာမဲ့ ထွက်ပြေးသွားကြကုန်၏။
ပူရဏကႆပ တိတၳိဆရာၾကီး၏ နိဂုံး
ထိုသို့ တိတ္ထိဆရာခြောက်ဦးတို့သည် ဦးတည်ရာအရပ်သို့ ပြေးသွားကြပြီးနောက် ပူရဏကဿပ
တိတ္ထိဆရာကြီး၏ အလုပ်အကျွေး တပည့်ဒါယကာတစ်ယောက်သည် တန်ခိုးပြဋိဟာပြပွဲသို့
ကြည့်ရှူရန်အတွက် လာရောက်ရာ လမ်းခရီးတွင် ဦးတည်ရာမဲ့ ပြေးလွားနေသော ဆရာဖြစ်သူ
ပူရဏကဿပကြီးကို တွေ့ရာ "အရှင်ဘုရား တပည့်တော်သည် အရှင်ဘုရားတို့ ပြအပ်သော
တန်ခိုးပြဋိဟာ ကို ဖူးမြော်ရန် လာခဲ့ပါသည်၊ အရှင်ဘုရား အခု အဘယ်အရပ်သို့ ကြွပါမည်
နည်း" ဟု မေးမြန်းလေသည်။ ပူရဏကဿပ ဆရာကြီးသည် " မင်းအတွက် တန်ခိုးပြဋိဟာ
ဖြင့် ဘာအကျိုးမည်နည်း၊ သင်ယူဆောင်လာသည့် အိုး နှင့် ကြိုးကိုသာ ငါ့ကိုပေးလော့" ဟု
ဆိုကာ အိုးနဲ့ကြိုးကို တောင်းယူကာ အစိရဝတီမြစ်သို့ သွားရောက်ခဲ့လေသည်။
မြစ်ကမ်းပါးသို့ ရောက်သောအခါ အိုးထဲသို့ သဲအပြည့်ထည့်ကာ အိုးကိုကြိုးနဲ့ချည်၍ လည်ပင်း
ကို စွပ်ကာ မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီး အဆုံးစီရင်သွားခဲ့လေသည်။ ပူရဏကဿပ တိတ္ထိဆရာကြီး
သည် ထိုသို့ သေလွန်ပြီးနောက် အဝီစိငရဲသို့ ကျရောက်သွားလေသည်။ အဘယ်ကြောင့်
မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ရသနည်းဆိုသော် တန်ခိုးပြဋိဟာပြိုင်ပွဲ ပြုလုပ်သည့်အခါ အမှန်
တကယ် မပြိုင်နိုင်သဖြင့် အရှက်ကြီးရှက်ကာ လူအများကို မျက်နှာမပြရဲတော့သောကြောင့်
ထိုကဲ့သို့ အဆုံးစီရင်သွားခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
တာဝတိ ံသာနတ်ပြည်သို့ ကြွတော်မူခြင်း
သိကြားမင်းသည် ညနေချမ်းအချိန်အခါ၌ မြတ်စွာဘုရားရှင် တန်ခိုးပြဋိဟာပြမည့်နေရာတွင်
မြတ်စွာဘုရားရှင်အတွက် ရတနာမဏ္ဍပ် ဆောက်လုပ်ရန် ဝိသုကြုံနတ်သားအား စေခိုင်းရာ
ဝိသုကြုံနတ်သားက တဆယ့်နှစ်ယူဇနာကျယ်ဝန်းပြီး ရတနာခုနှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော မဏ္ဍပ်
ကို ဖန်ဆင်းတော်မူလေသည်။ ယင်းမဏ္ဍပ်၌ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ တပည့် ရဟန်း၊ ရှင်လူများ
မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ညနေပိုင်း အချိန်သို့ရောက်သောအခါ တန်ခိုးပြဋိဟာ ပြရန်အတွက်
ဇေတဝန် ဂန္ဓကုဋီကျောင်းတိုက်မှ ထွက်ကြွတော်မူ၍ ဝိသုကြုံ ဖန်ဆင်းအပ်သော ရတနာ
မဏ္ဍပ်အတွင်း တယူဇနာပမာဏရှိသော ရတနာပလ္လင်၌ သီတင်းသုံးတော်မူ၏။
မြတ်စွာဘုရားရှင် တန်ခိုးပြဋိဟာ မပြမီ တန်ခိုးကြီးမြတ်သည့် ဃရဏီ မည်သော ဥပါသိကာ
မလေးသည် မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ရှိခိုးလျက် "ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရား တပည့်
တော်မကဲ့သို့သော သမီးတော်တစ်ယောက် ထင်ရှားရှိပါလျှက် ရှင်တော်ဘုရား ပင်ပန်းခံ
ပြုလုပ်ရန် မသင့်ပါ၊ တပည့်တော်မကို တန်ခိုးပြဋိဟာ ပြသခွင့်ကို ခွင့်ပေးတော်မူပါ" ဟု
လျှောက်ထားလေသည်။ ထို့အတူ စူဠအနာထပိဏ်မည်သော ဥပါသကာ၊ ခုနှစ်နှစ်အရွယ်
စိရာမည်သော သာမဏေမ၊ ခုနှစ်နှစ်သား စုန္ဒမည်သော ရဟန္တာသာမဏေငယ် နှင့်
အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်မထေရ်တို့က "မြတ်စွာဘုရား ပင်ပန်းစေတော်မမူပါနှင့် တပည့်တော်
တို့အား တန်းခိုးပြဋိဟာ ပြသခွင့်ပြုပါ" ဟု အသီးသီးလျှောက်ထားကြရာ ဘုရားရှင်သည်
ငြင်းပယ်တော်မူပြီး ကိုယ်တော်တိုင် တန်ခိုးပြဋိဟာ ပြသခဲ့လေသည်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ရဟန်း ရှင် လူ တပည့်ပရိသတ်အပေါင်းတို့အား ရောင်ခြည်တော်
ခြောက်သွယ်နှင့် တကွ အမျိုးမျိုးသော ရေမီးအစုံစုံ တန်ခိုးပြဋိဟာတို့ကို ပြတော်မူပြီး
မဟာသက္ကရာဇ် (၁၁၀) ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့် ညနေချမ်းအချိန်တွင် တာဝတိ ံသာနတ်ပြည်
သို့ ကြွတော်မူ၍ မယ်တော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသော သန္တုတိနတ်သားကို ကျေးဇူးဆပ်ရန်အလို့ငှါ
ပင်လယ်ကသစ်ပင်ရင်း ပဏ္ဍုကမ္ဗလာ ကျောက်ဖျာအထက်၌ ခုနှစ်ဝါမြောက် သီတင်းသုံး
ဝါဆိုတော်မူ၍ သန္တုတိနတ်သား အမှူးပြုသည့် နတ်ဗြဟ္မာအပေါင်းကို ဝါတွင်းသုံးလ
ပတ်လုံး နေ့ညဉ့်မပြတ် အဘိဓမ္မာမြတ်ဒေသနာကို ဟောကြားတော်မူလေသည်။
ဝိသာခါသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ ပစ္စည်းဥစ္စာ သုံးစွဲမကုန်အောင် ချမ်းသာကြွယ်ဝသည့်
၅။ ကာကဝလိယ - အားဖြင့် ငါးဦးတို့တွင်တစ်ဦးဖြစ်သော မေဏ္ဍက သူဌေးကြီး၏ မြေးတော်
သူဖြစ်၏။ မိဘတို့မှာ ဓနဥ္စယသူဌေး နှင့် သူဌေးကတော်သုမနဒေဝီတို့ ဖြစ်ကြသည်။
ဝိသာခါ၏ နေရင်းဇာတိမှာ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် အင်္ဂတိုင်း ဘဒ္ဒိယမြို့ဖြစ်၏။ သာဝတ္ထိနိုင်ငံ
ပသေနဒီ ကောသလမင်းက မိမိ၏နိုင်ငံတော်၌ အမိတဘောဂသူဌေးများမရှိသောကြောင့်
ယောက်ဖတော် ရာဇဂြိုလ်နိုင်ငံ ဘုရင်ဗိမ္ဗိသာရထံ သူဌေးတစ်ဦးတောင်းခံခဲ့ရာ ဗိမ္ဗိသာရမင်း
သည် အမိတဘောဂသူဌေးကြီးများကို နေရာ ပြောင်းရွှေ့ရန် မသင့်တော်သဖြင့် အမိတဘောဂ
သူဌေးကြီးတစ်ဦးဖြစ်သူ မေဏ္ဍက၏ သားဖြစ်သော ဓနဥ္စယ သူဌေးကိုမေတ္တာရပ်ခံကာ
ဓနဥ္စယသူဌေးကြီးမိသားစုတို့သည် သာဝတ္ထိနိုင်ငံတော်သို့ လိုက်သွားသောအခါ သာဝတ္ထိမြို့သည်
အကျွနု်ပ်နှင့်လိုက်ပါလာသော ပရိသတ်အတွက် နေရာကျဉ်းနေပါသည်။ ဤနေရာ၌နေပါရစေဟု
ကောသလ မင်းကြီးထံ ခွင့်တောင်း၍ နေခဲ့ကြသည်။ ထိုနေရာကား သာဝတ္ထိမြို့နှင့် ခုနှစ်ယူဇနာဝေး
သည့် သာကေတမြို့(ယခုအခါ - အယုဒ္ဓယမြို့)ဖြစ်သည်။
ဓနဥ္စယသူဌေးကြီးသည် သမီးဝိသာခါကို သာဝတ္ထိမြို့မှ မိဂါရသူဌေးကြီး၏သား ပုဏ္ဏဝဎ္ဍန နှင့်
လက်ဆက်ထိမ်းမြားပေးခဲ့ရာ လက်ဖွဲ့အဖြစ် မဟာလတာအဆင်တန်ဆာကို ဆင်ယင်ပေးခဲ့သည်။
၎င်းမဟာလတာ အဆင်တန်ဆာမှာ တန်ဖိုးအားဖြင့် ကိုးကုဋေတန်၏။ ဆင်ပြောင်ငါးစီးအားကို
ဆောင်နိုင်သည့် အမျိုးသမီးတို့ သာ ဝတ်ဆင်နိုင်သည်။
ဝိသာခါသည် ရတနာသုံးပါးကို ကြည်ညိုသည့် အမျိုးသမီးအားလုံးက အားကျအတုယူသင့်သော
သာသနာ့စံပြ အမျိုးသမီးတဦးလည်း ဖြစ်ပေသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူမနှင့်အိမ်ထောင်ကျသော မိသားစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်
အဝတ်မဝတ်သည့် ဂျိန်းတက္ကတွန်း တိတ္ထိဆရာကြီးများကို ကိုးကွယ်သော မိသားစု ဖြစ်၏။
ထိုဘာသာခြားမိသားစုကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်အောင် စည်းရုံးနိုင်ခဲ့သည်။ ဝိသာခါ၏
ယောက္ခမ မိဂါရ သူဌေးကြီးကဆိုလျှင် မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူသည့် တရားတော်ကို
နာယူပြီးနောက် အလှူဒါနလှူဒါန်းလျှင် အကျိုးကြီးရင့်မှုရှိသည့်နေရာဌာနကို သိရပါပြီဘုရား၊
ချွေးမအလိမ္မာ ဝိသာခါသည် တပည့်တော်တို့ မိသားစု ကောင်းကျိုးရရန်အတွက် တပည့်တော်တို့ အိမ်သို့ ရောက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်ဘုရား ဟု ဘုရားရှင် အားလျှောက်ထားခဲ့လေသည်။
ချွေးမအလိမ္မာ ဝိသာခါကိုလည်း မိမိ၏ မိခင်အရာ၌ ထားခဲ့လေသည်။
ဝိသာခါသည် သား (၁၀) ယောက်၊ သမီး (၁၀) ယောက် မွေးဖွားခဲ့သော်လည်း အရွယ်မကျ
ဆံပင်မဖြူ၊ သွားမကျိုး၊ လှပမြဲ လှပနေခဲ့သည်။ မြေးမလေးများနှင့် အတူထိုင်နေလျှင် ဘယ်သူ
ဝိသာခါ ဆိုသည်ကို ခွဲမရနိုင် ဟု ဆိုသည်။ အထိုင်အထကို ကြည့်၍သာ ဝိသာခါကို သိနိုင်ကြသည်။
သားသမီး (၂၀) တို့ကလည်း တစ်ဦး တစ်ဦးလျှင် သား(၁၀) ယောက်၊ သမီး (၁၀) ယောက်
မွေးဖွားခဲ့၍ မြေး (၄၀၀) ရှိခဲ့သည်။ မြေး (၄၀၀) တို့က လည်း တစ်ဦးတစ်ဦးလျှင် သား (၁၀) ယောက်၊
သမီး (၁၀) ယောက်စီ မွေးဖွားခဲ့ပြန်ရာ မြစ် (၈၀၀၀) ရှိခဲ့ လေသည်။
သားသမီး မြေးမြစ်တို့သည် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် သေဆုံးခြင်းမရှိ ကျန်းမာသန်စွမ်းကြသည်။
ထို့ကြောင့် ဝိသာခါ ကို အလွန်ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်
ထားကြသည်။ အသိအမှတ် ပြုထားကြသည်။ မင်္ဂလာပွဲ ကုသိုလ်ပွဲစသော ပွဲသဘင်များ ပြုလုပ်
ကြလျှင် ဝိသာခါသူဌေးကတော်၊ အနာထပိဏ်သူဌေးတို့ကို ဖိတ်မန ္တကပြုလေ့ရှိကြသည်။
တစ်ချိန်သောအခါ ဝိသာခါသည် မဟာလတာအဆင်တန်ဆာကို ဆင်ယင်၍ ပွဲသဘင်
တစ်ခုကို သွားရင်း ဇေတဝန်ကျောင်းအနီးမှ ဖြတ်သွားလေရာ ပွဲသဘင်သွားလို့ အကျိုးမရှိ၊
ဘုရားရှင်ကို ဝင်ရောက်ဖူးမြော် တရားကို နာယူရခြင်းက ပိုပြီးအကျိုးရှိနိုင်ပေတယ် ဟု
စဉ်းစား၍ ပွဲသဘင်သို့ မသွားတော့ဘဲ၊ ဘုရားရှင်ထံ ဝင်ရောက်ဖူးမြော် တရားတော်များနာခဲ့သည်။
ဘုရားရှင်ထံ ဝင်ရောက်ဖူးမြှော်ရာတွင် မဟာလတာအဆင်တန် ဆာကိုဝတ်၍ ဖူးမြှော်ခဲ့ပါက
စိတ်မငြိမ် စိတ်ပြန့်သူတို့၏ အသွင်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်သွားမည် (အလှအပ အာရုံဘက် စိတ်ရောက်
နေပါက တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် မရှိနိုင်တော့ချေ) အဆင်တန်ဆာကိုဝတ်၍ ဖူးမြော်ခြင်း သည်
မသင့်တော်ချေဟု စဉ်းစားမိသဖြင့် မဟာလတာအဆင်တန်ဆာကို ချွတ်ကာ ဘုရားရှင်ကို
ဝင်ရောက် ဖူးမြော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။
ထိုအဆင်တန်ဆာကို သွားလေရာရာ ခေါ်နေကြ ကျွန်မ, က ခေါက်သိမ်းသယ်ဆောင်ပြီး ဝိသာခါ ဇေတဝန်ကျောင်းမှအပြန်တွင် မေ့ကျန်ခဲ့လေသည်။ အရှင်အာနန္ဒာက ထိုမဟာလတာ
တန်ဆာကို ကောက်ယူသိမ်းဆည်း၍ စောင်းတန်းလှေကားတဖက်၌ ချိတ်ဆွဲထားလိုက်သည်။
ဝိသာခါသည် ဇေတဝန်ကျောင်း ဥပစာသို့ ရောက်၍ မဟာလတာအဆင်တန်ဆာကို ယူခဲ့ရန်
ကျွန်မကို ပြောဆိုရာ ကျွန်မ က မေ့ကျန်ခဲ့ကြောင်း ဝိသာခါအား ပြောကြားခဲ့လေသည်။
ဝိသာခါ က ပြန်ယူဖို့ရန် ထိုသို့ပြန်ယူရာတွင် အရှင်အာနန္ဒာ သိမ်းဆည်းပြီးဖြစ်ပါက မယူခဲ့
တော့ရန်၊ အရှင်အာနန္ဒ အား စွန့်လှူပြီး ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်မ အား မှာကြားလိုက်လေသည်။
ကျွန်မ , လည်း ဇေတဝန်ကျောင်းအတွင်းသို့ပြန်၍ မဟာလတာအဆင်တန်ဆာကို သွားရောက်
ယူငင်ရာ အရှင်အာနန္ဒာသိမ်းဆည်းထားခဲ့သည်ကို တွေ့ခဲ့ရသဖြင့် ဝိသာခါအား ထိုအကြောင်း
အရာကို ပြန်ကြားပြောဆို ခဲ့လေသည်။ ဝိသာခါက အရှင်အာနန္ဒာ အရှင်မြတ်ကိုင်တွယ်
သုံးသပ်ပြီးသော မဟာလတာအဆင်တန်ဆာကို ငါမဆင်လိုတော့ဘူး စွန့်လှူလိုက်ပြီ။
သို့သော် အရှင်မြတ်များအဖို့ မဟာလတာအဆင်တန်ဆာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ရန်
ဝန်ထုပ်၊ ဝန်ပိုးကြီး ဖြစ်နေလိမ့်မည်။ ဤမဟာလတာတန်ဆာကို ရောင်းချ၍ သံဃာတော်များအား
အပ်စပ်သော ဆွမ်း၊ သင်္ကန်း၊ ကျောင်း၊ ဆေး ပစ္စည်းလေးပါးကို လှူဒါန်းရပေမည်။
သွားယူချေဟု ကျွန်မ ကို ယူခိုင်းခဲ့သည်။
ထို့နောက် ရွှေပန်းတိမ်သည်ကို တန်ဖိုးဖြတ်စေခဲ့ရာ ရွှေပန်တိမ်သည်က မဟာလတာအဆင်
တန်ဆာသည် ကိုးကုဋေတန်ကြောင်း လက်ခံတစ်သိန်းတန်ကြောင်း တန်ဖိုးဖြတ်ပေးခဲ့သည်။
ဝိသာခါသည် မဟာလတာအဆင်တန်ဆာကို သာဝတ္ထိတစ်မြို့လုံးလှည့်၍ ရောင်းချခဲ့ရာ
မည်သူမှ မဝယ်နိုင်ချေ၊ မဟာလတာအ ဆင်တန်ဆာကို ဝတ်ဆင်နိုင်သူမှာလည်း ဘုရားရှင်
၂။ ဗန္ဓုလစစ်သူကြီးကတော် မလ္လိကာ၊
၃။ ဗာရာဏသီသူဌေးကြီး၏သမီးတို့ ဖြစ်ကြသည်။
ဝိသာခါသည် ဝယ်ယူနိုင်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မရှိသောအခါ ကိုယ်တိုင်ပင် ဝယ်ယူ၍
ဘုရားရှင်အား အကြောင်းခြင်းရာကို လျှောက်ထားကာ ဆွမ်း၊ သင်္ကန်၊ ကျောင်း၊ ဆေး ပစ္စည်း
လေးပါးတွင် အဘယ်ပစ္စည်း ကို လှူဒါန်းလျှင် သင့်တော်ပါမည်နည်းဘုရားဟု လျှောက်ထား
မေးမြန်းခဲ့လေသည်။ ဘုရားရှင်က သာဝတ္ထိမြို့ အရှေ့တံခါးအနီး၌ သံဃာ နေထိုင်ရန်
ကျောင်းဆောက်လုပ်လျှင် သင့်တော်ကြောင်း မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
ဝိသာခါသည် ကျောင်းဆောက်လုပ်ရန်အတွက် မြေနေရာကို (၉) ကုဋေဖြင့် ဝယ်ယူ၍၊
(၉) ကုဋေ အကုန်အကျခံကာ ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး၊ (၉) ကုဋေကုန် ကျောင်းရေစက်ချ
လှူဒါန်းပွဲကြီးကို လေးလကြာမျှ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျောင်းဆောက်ချိန်မှာ တန်ခိုးရှင် အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်၏ စောင့်ရှောက်ကူညီမှုကို ရသဖြင့် (၉) လသာကြာမြင့်ခဲ့သည်။
ဝိသာခါ ဆောက်လုပ်သော ကျောင်းတော်ကြီးမှာ နှစ်ထပ်ပြဿဒ်ကျောင်းကြီးဖြစ်၍
အောက်ထပ်၌ အခန်းပေါင်း (၅၀၀) ၊ အထက်ထပ်၌ အခန်းပေါင်း(၅၀၀) ရှိခဲ့သည်။
ထိုပြဿဒ်ဆောင်မကြီးကို ဝန်းရံ၍ ကမ္မဌာန်းကျောင်းပေါင်း (၅၀၀)၊ ပြဿဒ်ငယ် (၅၀၀)၊
တန်စောင်းရှည်ပေါင်း (၅၀၀) တို့ကိုလည်း ဆောက်လုပ် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သာဝတ္ထိမြို့၏ အရှေ့ဘက်၌ ဆောက်လုပ်ခဲ့သောကြောင့် ပုဗ္ဗာရုံကျောင်းတော်ဟု
ကျောင်းအမကြီး ဝိသာခါသည် ကျောင်းအလှူသာမက နေ့စဉ်နေ့စဉ် ရဟန်းတော် (၅၀၀)
တို့အား မိမိအိမ်၌ ဆွမ်းဘောဇဉ်များကို ဆက်ကပ်သည်။ ဘုရားရှင်ထံ ချဉ်းကပ်၍
၁။ သံဃာတော်အား ရာသက်ပန် မိုးရေခံသင်္ကန်း လှူဒါန်းခွင့်၊
၂။ ဧည့်သည်ရဟန်းတို့အား ဆွမ်းလှူဒါန်းခွင့်၊
၃။ ခရီးသွားရဟန်းတို့အား ဆွမ်းလှူဒါန်းခွင့်၊
၄။ မကျန်းမာသည့် ရဟန်း၊
၅။ သူနာပြုရဟန်းတို့အား ဆွမ်းလှူခွင့်၊
၆။ မကျန်းမာသည့်ရဟန်းတို့အား ဆေးဝါးလှူခွင့်၊
၇။ ယာဂု (ဆန်ပြုတ်) အမြဲလှူခွင့်၊
၈။ ဘိက္ခုနီသံဃာအား ရေသနုပ်သင်္ကန်းလှူခွင့် ဟူသော ဆု (၈) မျိုးကိုတောင်းကာ
ထို့ကြောင့် ဘုရားရှင်က ဝိသာခါ အား ဒါယိကာဧတဒဂ်(လှူဒါန်းပေးကမ်းကြသည့်
အမျိုးသမီးတို့တွင် အမြတ်ဆုံး) ကို ချီးမြင့်တော်မူခဲ့ပေသည်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ကျောင်းဒကာ ပုဏ္ဏဝဎ္ဍနသူဌေး + ကျောင်းဒကာမ
ဝိသာခါသူဌေးကတော် မိသားစုတို့၏ သဒ္ဓါတရားကို ချီးမြှောက်တော်မူသောအားဖြင့်
ထို ပုဗ္ဗာရုံ ကျောင်းတော်ကြီး၌ (၅) ဝါတိတိ သီတင်းသုံးတော်မူခဲ့သည်။
ကျောင်းဒကာ ပုဏ္ဏဝဎ္ဍနသူဌေး နှင့် ကျောင်းဒကာမ ဝိသာခါသူဌေးကတော်တို့
ခမ်းနားကြီးကျယ်စွာ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့သော ပုဗ္ဗာရုံကျောင်းတော်ကြီးသည်
အစိရဝတီမြစ်ရေတိုက်စားမှုဘေး၊ ဘာသာခြားတို့၏ ဖျက်ဆီးမှုဘေး၊ သဘာဝဘေး
အမျိုးမျိုးတို့ကြောင့် ပျက်စီး၍ သွားခဲ့ရာ၊ ယနေ့အချိန်၌ မတွေ့ရတော့ချေ။
ပုဗ္ဗာရုံ ကျောင်းနေရာ၌ ကန္ဒဘာရီဟု ခေါ်သောရွာရောက်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
အေဒီ (၇) ရာစုက မဇ္စျိမဒေသသို့ သွားခဲ့သော တရုတ်ဘုန်းကြီး ဟူယင်ဆန်၏
မှတ်တမ်း၌ သာဝတ္ထိမြို့မှာ ကျောင်းတိုက်အပျက်ကြီးများ တွေ့ရ၍ သမ္မိတိယဂိုဏ်းဝင်
ရဟန်းအချို့ကို တွေ့ရကြောင်း ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
သာဝတ္ထိမြို့၌ ဖြစ်ထွန်းသော ဘိက္ခု၊ ဘိက္ခုနီ၊ ဥပါသကာ နှင့် ဥပါသိကာမတို့သည်
မရေတွက်နိုင်အောင် များပြားလှသည်ဟု ဆိုသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် ဆန့်ကျင်ဖက်
(တိတ္ထိ)၊ နိဂဏ္ဍဂိုဏ်းဝင် ဂျိန်း(Jain)များ၊ အာဇီဝကများ၊ ပရိဗ္ဗာဇကများ၊ ဗြဟ္မဏ
ပုဏ္ဏားများ အခြေချနေထိုင်ကျသဖြင့် ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ လူမူရေး
ကိစ္စများနှင့် ရောပြွမ်း၍ ကြီးကျယ်ခမ်းနားခဲ့သော မြို့တော်ကြီးလည်း ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု
မဇ္စျိမဒေသမှ လေ့လာစရာ နေရာဒေသများ - ၂၁ (သာဝတ္ထိ)
11:27 PM မဇ္စျိမဒေသမှ လေ့လာစရာများ No comments
ဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်းသို့ အဝင်ဂိတ်မှ ဝင်ပြီး လမ်းဖြောင့်အတိုင်း ဆက်
သွားလျှင် မလှမ်းမကမ်းတွင် အာနန္ဒာဗောဓိပင်ကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဘုရားရှင်ရှိစဉ်အခါက
သာဝတ္ထိ မြို့သူမြို့သား ဒကာ၊ ဒကာမများတို့သည် နံ့သာ၊ ပန်းမာလ်များကိုယူဆောင်၍
ဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ရန် ဇေတဝန် ကျောင်းတော်သို့ လာရောက်ကြရာ ဘုရားရှင်က ဒေသ
စာရီကြွချီတော်မူသွားသောကြောင့် ဘုရားရှင်ကို မဖူးမြင်ရသဖြင့် ကိုးကွယ်ရာမဲ့ဖြစ်ကာ
ယူလာခဲ့ကြသော နံ့သာ၊ ပန်းမာလ်များကို ဂန္ဓကုဋိ ကျောင်းတော်တံခါး၌ ပစ်ချပြီး ပြန်သွားခဲ့
ကြလေသည်။ အနာထပိဏ်သူဌေးကြီးသည် ထိုအကြောင်းအရာကို အရှင်အာနန္ဒာအား
လျှောက်ထား၍ လာရောက်ဖူးမြော်သူများပူဇော်ရန် ဌာနတခုရှိသင့်ကြောင်း ဘုရားရှင်အား
အရှင်အာနန္ဒာက ထိုအကြောင်းအရာကို ဘုရားရှင်အား လျှောက်ထားခဲ့ရာ ဘုရားရှင်က
မိမိကိုယ်စားအဖြစ် ပူဇော်နိုင်ကြရန် မူလမဟာဗောဓိပင်မှ မျိုးစေ့ကိုယူ၍ ဗောဓိပင်ကိုစိုက်ပျိုးရန်
အမိန့်တော်ရှိခဲ့သည်။ အရှင်အာနန္ဒာကလည်း အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်ကို ဇေတဝန်ကျောင်း
တံခါးအနီး၌ ဗောဓိပင်စိုက်ပျိုးမည်ဖြစ်ပါ၍ မူလမဟာဗောဓိပင်မှမျိုးစေ့ကို ယူဆောင်ပေးပါရန်
လျှောက်ထားခဲ့ရာ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်သည် အဘိညာဉ်တန်ခိုးဖြင့် ဗောဓိမဏ္ဍိုင်သို့ကြွကာ
အညှာမှကြွေကျဆဲဖြစ်၍ မြေကြီး ပေါ်သို့ မကျသေးသော ဗောဓိသီးမျိုးစေ့ကို သင်္ကန်းဖြင့်ခံယူကာ
ယူဆောင်ခဲ့ပြီး အရှင်အာနန္ဒာအား ပေးခဲ့လေသည်။
အရှင်အာနန္ဒာသည် စိုက်ပျိုးမည့်ချိန်ခါနေ့ရက်ကို ကောသလမင်းကြီး၊ အနာထပိဏ်သူဌေးကြီး၊
ဝိသာခါ၊ အခြားသဒ္ဓါတရားရှိကြသည့်သူတို့အား မိန့်ကြား၍ ရောက်လာကြသောအခါ ဗောဓိ
မျိုးစေ့ကို စိုက်ပျိုး ရန် ပသေနဒီကောသလမင်းကြီးလက်သို့ အပ်ခဲ့သည်။ ကောသလမင်းကြီး
သည် မင်းအဖြစ်ဆိုတာ အခါခပ်သိမ်း မတည်မြဲနိုင်သောကြောင့် ဗောဓိပင်ကို အရှည်သဖြင့်
စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်ခက်သည်။ သို့ဖြစ်၍ အနာထပိဏ်သူဌေးကို စိုက်ပျိုးစေမှ သင့်တော်မည်ဟု
စဉ်းစားဆင်ခြင်ကာ ဗောဓိပင်မျိုးစေ့ကို အနာထပိဏ်သူဌေးလက်သို့ အပ်လိုက်သည်။
အနာထပိဏ်သူဌေးသည် အပေါက်ဖောက်ထားသော ရွှေဖျဉ်းအိုးဝယ် နံ့သာညွန်များကိုထည့်၍
ဗောဓိမျိုးစေ့ကို စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ အတောင်(၅၀) အမြင့်ရှိပြီး အရပ်လေးမျက်နှာတွင် ကိုင်းကြီး
လေးကိုင်း အပေါ်သို့တက်သော ကိုင်းကြီးတစ်ကိုင်းအားဖြင့် အကိုင်းကြီး ငါးကိုင်းရှိသော
ဗောဓိပင်ပေါက်လာခဲ့သည်။ အရှင်အာနန္ဒာ၏ လျှောက်ထားချက်အရ ဘုရားရှင်သည်
လူများ စွာတို့ ကောင်းကျိုးစီးပွါးရရှိစေရန် ဗောဓိပင်၏အနီးအောက်၌ သမာပတ်
ဝင်စား၍ တစ်ညတာမျှ သီတင်းသုံး တော်မူခဲ့သည်။ (ဇာတက - ဌ၊ ၄။ ၂၂၈)
ဘုရားရှင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း အရှင်အာနန္ဒာ၏အစီအစဉ်ဖြင့် ဗောဓိပင်ကို စိုက်ပျိုးခဲ့သဖြင့် အာနန္ဒာဗောဓိပင်ဟု ခေါ်ဆိုကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ဇေတဝန်ကျောင်းတော်သည် နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်နီးပါးမျှ တောကြီးမျက်မည်းအဖြစ် စွန့်ပစ်
ခံထားခဲ့ရခြင်းကြောင့် အာနန္ဒာဗောဓိပင်သည် မည့်သည့်နေရာတွင် အမှန်တကယ်တည်ရှိသည်
ဟုညွှန်ပြသည့် ရှေးဟောင်းသုတေသန အထောက်အထား မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဤ(လက်ရှိ)
ဗောဓိပင်အား မူလ (အာနန္ဒာဗောဓိ)အဖြစ် ဖော်ပြသည်မှာ အတော်အတန် သံသယဖြစ်ဖွယ်
ရှိနေသည်ဟု ဆိုသည်။ အာနန္ဒာဗောဓိပင်ကို ဇေတဝန်၏ ယခုလက်ရှိ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီး
ကျောင်းဟောင်းနေရာအနီး တစ်နေရာတွင် ဖြစ်ရမည်ဟု ယူဆရသည့် ပင်မဂိတ်ပေါက်အနီး၌
စိုက်ပျိုးခဲ့ကြောင်း သုတေသီတို့က ခန့်မှန်းကြသည်။
ဘုရားရှင်လက်ထက်က ခမ်းနားကြီးကျယ်လှသော ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြိးအတွင်းဝယ် ယခုအခါ တွေ့ရှိရသမျှမှာ အောက်ခံခုံများသာ တွေ့ရှိရတော့သည်။ ဘုရားရှင်သီတင်းသုံးခဲ့ရာ ဂန္ဓကုဋိကျောင်းတော်ရာ၊ ကောသမ္ဗကုဋိ(ကြို့ပင်ကျောင်း) တည်ရှိရာနေရာ၊ ကရေကုဋိ
(ရေခတက်ပင်ကျောင်းတော်)တည်နေရာ၊ ဘုရား ရှင်နှင့်ရဟန်းတော်တို့ ခြေတော်ဆေး
အသုံးပြုသည်ဆိုသော ရေတွင်းဟောင်း၊ အာနန္ဒာဗောဓိပင်၊ လာဘ်လာဘ ပေါများသည့်
အရာ၌ ဧတဒဂ်ထားခြင်းခံရသော ရှင်သီဝလိ၏ ကျောင်းတော်ရာ ဟုပြောဆိုကြသည့်နေရာ၊ အရှင်အဂုင်္လိမာလမထေရ်၏ ကျောင်းတော်ရာနှင့် အရိုးအိုးစေတီဟု ဆိုကြသောနေရာ
တရုတ်ရဟန်းတော် ဖာဟီယန် သာဝတ္ထိမြို့သို့ ရောက်ရှိစဉ်အခါက ဇေတဝန်ကျောင်းနေရာ၌
အချို့သော ကျောင်းဆောင်များ၊ ဘုရားဆင်းတုတော်များတွေ့ရသေးသည်ဟု ဆိုသော်လည်း
တရုတ်ရဟန်းတော် ဟူယင်ဆန် ရောက်ရှိသွားချိန်တွင်မူ သာဝတ္ထိမြို့ရော ဇေတဝန်ပါ
လူသူမရှိဘဲ အပျက်အစီးများသာ ကျန်ရှိတော့သည်ဟု ဆိုသည်။
ဗြိတိသျှခေတ် ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနက (၁၇၈၄-အေဒီ)၊ ခရစ်နှစ် (၁၈၆၃)ခုနှစ်တွင်
ဆာအလက်ဇန္ဒား ကန်နင်ဟန်(Sir Alexander Cunnigham) က ဖာဟီယန် နှင့် ဟူယင်ဆန်
တို့၏ ခရီးသွားမှတ်တမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည့် သတင်းအချက်လက်များကို အသုံးပြု၍
ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ရာကို တူးဖော်ခဲ့ကြရာ (၇) ရာစုခေတ် ဗုဒ္ဓဒေဝ စေတီအပါအဝင်
စေတီကြီး(၄) ဆူ၊ စေတီငယ် (၈) ဆူနှင့် ကျောင်းဆောင် ကြီး/ငယ် (၂၀) တို့ကို တွေ့ရှိခဲ့
ထိုဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီး၌ ဘုရားရှင်သည် (၁၉) ဝါတိတိ သီတင်းသုံးတော်မူခဲ့ပြီး
သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ရှင် ဘုရားသခင်အဖြစ်ဖြင့် (၄၅) ဝါနေတော်မူ၍ တရားရေအေး
တိုက်ကျွေးတော်မူ ခဲ့ရာ ဇေတဝန်ကျောင်းတော်၌ သီတင်းသုံးတော်မူသည့်နှစ်သည်
ကျောင်းဒါယကာ အနာထပိဏ်သူဌေးကြီး + ကျောင်းဒါယိကာမသူဌေးကတော် ပုည
လက္ခဏဒေဝီ တို့၏ သဒ္ဓါတရားကို ချီးမြှောက်တော်မူခြင်းဖြစ်၏။ ဇေတဝန်ကျောင်းတော်၌
ဝါဆိုသည့်နှစ်များဝယ် ရပ်ဝေး ဒေသ၌ ဗုဒ္ဓဝေနေယျပုဂ္ဂိုလ်များ မရှိခြင်းကြောင့်လည်း
အနာထပိဏ်သူဌေးကြီးသည် ကျောင်းအလှူသာမက နေ့စဉ်နေ့တိုင်း စာရေးတံမဲကျသော
ရဟန်း (၅၀၀) တို့အား စာရေးတံဆွမ်း(၅၀၀)၊ စာရေးတံ ယာဂုဆွမ်း(၅၀၀) လဆန်းတစ်ကြိမ်၊
လဆုတ်တစ်ကြိမ် ဆက် ကပ်လှူဒါန်းသော ပက္ခိကဆွမ်း(၅၀၀) စသည်ဖြင့် အလှူဒါနပေါင်း
မြောက်များစွာကိုလည်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်း ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်က အနာထပိဏ်
သူဌေးကြီးအား ဒါယကဧတဒဂ်(လှူဒါန်းပေးကမ်းခြင်း၌ မွေ့လျော်ကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်
ဇေတဝန်ကျောင်း၏ မြောက်ဘက် ၂ ကီလိုမီတာခန့်အကွာမြို့တွင်းဂိတ်နှင့် ကောသလမင်း
နန်းတော်ရာနေရာအနီးတွင် အဂုင်္လိမာလ စေတီ(ပါကစ်ကုဋီ) နှင့် သုဒတ္တစေတီ (ကာကျစ်ကုဋီ)
အိန္ဒိယရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနက ခရစ်(၁၉၅၉)ခုနှစ်တွင် သာဝတ္ထိမြို့ကို ထိန်းသိမ်းသော
အခါ စေတီကြီး(၂)ဆူနှင့် ကျောင်းဆောင်တစ်ခုကို တွေ့ရှိရသည်ဟု ဆိုသည်။ စေတီများသည်
တရုတ်ရဟန်းတော် ဗာဟီယန် မှတ်တမ်းအရ အဂုင်္လိမာလစေတီ နှင့် သုဒတ္တစေတီ ဟု ဖော်ပြ
အဂုင်္လိမာလရဟန်းသည် ကလေးမဖွားနိုင်သူကို (အဂုင်္လိမာလသုတ်) ပရိတ်တော်ရွတ်ဆို၍
မွေးဖွားပေးခဲ့သည်။ ထိုနေရာ၌ မြို့သူမြို့သားများက အထိန်းအမှတ်အဖြစ် အုပ်ခုံ(စေတီ)
ပြုလုပ်ထားခဲ့ကြသည်။ ယင်း အုပ်ခုံစေတီကို အသောကမင်းကြီးက ထူပါရုံ(လိုဏ်ဂူစေတီ)
တည်ဆောက်လိုက်သဖြင့် အင်္ဂုလိမာလစေတီဟူ၍ ထင်ရှားလာခဲ့သည်။ အိန္ဒိယကို အင်္ဂလိပ်
တို့အုပ်ချုပ်သောခေတ်တွင် အဂုင်္လိမာလစေတီအပေါ် မူဆလင်ဘုန်းကြီးက ကျောင်းဆောင်
(ပါကစ်ကုဋီ) ဆောက်လုပ်ပြီး နေထိုင်ခဲ့၏။
သုဒတ္တစေတီသည် အဂုင်္လိမာလစေတီ အနားတွင် တည်ရှိသည်။ သုဒတ္တ (အနာထပိဏ်သူဌေး)
သေဆုံးသွားသောအခါ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုက အထိမ်းအမှတ် ပူဇော်ပွဲကျင်းပသည့်နေရာတွင်
စေတီတစ်ဆူတည်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းစေတီနေရာတွင် အသောကမင်းကြီးက အုပ်စေတီ(ထူပါ)
ကြီးတည်ဆောက်လိုက်သဖြင့် သုဒတ္တစေတီဟု ထင်ရှားလာခဲ့သည်။
ဤ သုဒတ္တစေတီအပေါ်၌လည်း ဟိန္ဒူဘုန်းကြီးက (ကာကျစ်ကုဋီ) ဆောက်လုပ်ပြီး နေထိုင်ခဲ့
သည်။ သာသနာနှစ် (၂၅၀၀) ပြည့် (၁၉၅၆) ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယအစိုးရသည် သုဒတ္တစေတီ
ပေါ်တွင်ရှိသော ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း(ကာကျစ်ကုဋီ) နှင့် အဂုင်္လိမာလစေတီပေါ်တွင်ရှိသော
မူဆလင်ဘုရားကျောင်း (ပါကစ်ကုဋီ) ကို ဖယ်ရှားလိုက်ပြီး မူလစေတီများဖြစ်သော သုဒတ္တ
စေတီ နှင့် အဂုင်္လိမာလစေတီ တို့အတိုင်း ပြန်လည်ပြုပြင်၍ ထိန်းသိမ်းထားသည်ကို
သာဝတ္ထိမြို့၊ ဇေတဝန်ကျောင်းတော်၏ အရှေ့တောင်ဖက် တစ်မိုင်အကွာတွင် ဘုရားရှင်
တာဝတိ ံသာနတ်ပြည်သို့ ကြွမြန်းသောနေရာရှိသည်။ ထိုနေရာ၌ အသောကမင်းကြီးသည်
စေတီ နှင့် ကျောက်စာတိုင် အမှတ်သားပြု၍ တည်ထားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ကျောက်စာ
တိုင်မှာ ပျောက်သွား၍ စေတီကြီးမှာ ပြိုကျပျက်စီးသွားသဖြင့် ကုန်းမြင့်တခုအဖြစ်သာ
တွေ့မြင်နိုင်တော့သည်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် တာဝတိ ံသာနတ်ပြည်သို့ မကြွမှီ ဤနေရာ
(သရက်ဖြူကုန်း) ၌ တန်ခိုးပြာဋိယာတို့ကို ပြသတော်မူခဲ့သည်။
တစ်ချိန်သော အခါက ရာဇဂြိုလ်သူဌေးသည် စန္ဒကူးသားကို သပိတ်ပြုလုပ်၍ အတောင် (၆၀)
မြင့်သော တိုင်ထိတ်ပေါ်တွင် ထား၍ ရဟန္တာဖြစ်သူ၊ တန်ခိုးဣဒ္ဓိပတ်ရှိသူသည် ကောင်းကင်
ခရီးဖြင့် ကြွရောက်ကာ ဤ စန္ဒကူးသပိတ်ကို အလှူခံတော်မူပါ၊ အကျွနု်ပ်သည် သား မယားနှင့်
အတူ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပါမည်ဟု လှည့်လည်ကြေညာခဲ့သည်။
ထိုအခါ ဘုရားအမည်ခံ ပူရဏကဿပ၊ မက္ခလိဂေါသာလ၊ ပကုဓကစ္စာယန၊ သဥ္စယဗေလဌပုတ္တ၊
အဇိတကေသကမ္မလ၊ နိကဏ္ဍနာပုတ္တ ဟူသော တိတ္ထိဆရာကြီး (၆) ယောက်တို့သည် စန္ဒကူး
သပိတ်ကို ရဖို့ရန်အတွက် အမျိုးမျိုးကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ မည်သည့် တန်ခိုးဣဒ္ဓိပတ်မှ မရှိသည့်
အတွက် စန္ဒကူးသပိတ်ကို မရယူနိုင်ကြပဲ အဆုံးတွင် လက်လျော့ခဲ့ရသည်။
အရှင်ပိဏ္ဍောလဘာရဒွါဇ သည် တန်ခိုးတော်ဖြင့်ကြွချီကာ ရာဇဂြိုလ်သူဌေး၏ စန္ဒကူးသပိတ်ကို
အလှူခံတော်မူခဲ့သည်။ သပိတ်အလှူခံပြီး ဝေဠုဝန်ကျောင်းသို့ ပြန်ကြွသွားသောအခါ စန္ဒကူး
သပိတ်ကို တန်ခိုးဖြင့် အလှူခံပုံကို မမြင်လိုက်ရသောလူများက မိမိတို့လည်း ကြည်ညိုလိုကြ
သဖြင့် တန်ခိုးဣဒ္ဓိပါဒ်ပြသပေးပါရန် တောင်းပန်လျှောက်ထားကြရာ အရှင်ပိဏ္ဍောလဘာရဒွါဇ
က တန်းခိုးအမျိုးမျိုးကို ပြသပေးတော်မူခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းအရာကို မြတ်စွာဘုရားရှင်က
သိသဖြင့် ရဟန်းတော်တို့အား တန်ခိုးဣဒ္ဓိပါဒ်ပြသခွင့်ကို ပိတ်ပင်တော်မူ၍ တန်ခိုးပြသပါက
ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်အရ ဒုက္ကဋ်အာပတ်သင့်စေဟု သိက္ခာပုဒ် ပညတ်တော်မူခဲ့သည်။
တိတ္ထိတို့သည် မြတ်စွာဘုရားရှင်က သာဝကတို့ကို တန်းခိုးပြသခွင်ပိတ်ပင်လိုက်သဖြင့် မိမိ
ကိုယ်တိုင်လည်း တန်ခိုးပြတော့မည်မဟုတ်ဟု ယူဆကြကာ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ကုန်
ကြသည်။ ထို့နောက် ရဟန်းဂေါတမ နှင့် တန်းခိုးပြိုင်မည်ဟု ကြေညာကြလေသည်။
တိတ္ထိတို့၏ ကြေညာမှု့ကို ယုံကြည်ကြသော လူတို့က တိတ္ထိတို့ကို အထင်ကြီးပြီး ရဟန်း
တော်များအား တိတ္ထိတို့နှင့် တန်ခိုးမပြိုင်ဝံ့သယောင် အထင်သေး အမြင်သေးပြောကြား
ကြသည်ကို မြတ်စွာဘုရားရှင်က သိရှိတော်မူပြီးနောက် ကိုယ်တော်တိုင်ပင်လျှင် သာဝတ္ထိ
မြို့ရှိ သရက်ဖြူပင်ရင်း၌ တန်ခိုးပြိုင်မည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။